Mpikambana:Bot-Jagwar/tenin'ny gazety/16 Mey 2013 - Wikibolana, raki-bolana malalaka
Mpikambana:Bot-Jagwar/tenin'ny gazety/16 Mey 2013
Leaf (nitranga in-2) : ity lahatsoratra ity dia navoakan'i Rachel Wang originally tao amin'ny Tea Leaf Nation (Firenena Ravin-dite) tamin'ny 13 Mey 2013 ary navoaka indray ho anisan'ny fifanarahana fifampizarana votoaty [Endrika natao nanara-bolontany hahamora ny fandikan-dahatsoratra]. (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
nofidiana (nitranga in-1) : «Teo anivon' ny toeram-pikarohana Africa Rice sy ny FOFIFA no nahazoana ilay karazam- bary Nerica, nofidiana manokana noho ny singa ao anatiny sy ny hery entiny», hoy kosa Philippe Courbet, manam-pahaizana momba ny fambolena avy amin'ny ivon-toeram-pikarohan' ny Nestlé, any Abidjan. (Fikarohana – Nampahafantarina ny karazam-bary vaovao ho an’ny sakafo mahasalama)
havadika (nitranga in-1) : Ireo no havadika ho fomba fiasa sy ampianarina ny ankizy amin'io sekoly io», hoy Raparivo Tiana, zanany ary tompo-marika amin' ny fametrahana iry tetik'asa «sekolin'ny sary» iry. (Sary sy hosodoko – Hisokatra amin’ny fialan-tsasatra lehibe ny «sekolin’ny sary» an-dRaparivo)
Randrianantoandro (nitranga in-1) : Haja Randrianantoandro. (Ambohibao Antehiroka – Adiny telo no nampihorohoroan’ny jiolahy ny Ben’ny tanàna mivady)
hiompana (nitranga in-1) : Araka ny fanambarana avy amin'ny Fiadidiana ny tetezamita, omaly, dia hiompana amin'ny fampiharàna ny andininy faha-14 ao
anatin'ny sori-dalana, izay mamariparitra ny manodidina ny fiaraha-mitantana telo loha ny diniky ny efa-tonta amin'io fotoana io. (Fiaraha-mitantana ny tetezamita – Hampitovy tadin-dokanga Rajoelina, Beriziky, Rakotoarivelo ary Rasolosoa Dolin)
tatitry (nitranga in-1) : Raha ny tatitry ny mpitandro ny filaminana hatrany dia «nifona tamin'ny ray aman-drenin'io zaza io ity lehilahy sady nilaza fa tsy vita hatramin'ny farany ny fikasan-dratsiny satria nikiakiaka nitomany ilay zaza ka dia navelany». (Lazaina Avaradrano – Mpiandry omby voatondro ho nanolana zaza efa-taona)
Andoharanofotsy (nitranga in-1) : tafakatra 11 ireo olona voasambotra mikasika ilay raharaha famonoana sinoa vavy, tetsy Andoharanofotsy, ny alin'ny 12 avrily lasa teo. (Famonoana sinoa vavy – Tafakatra 11 ireo voasambotra, vehivavy iray karohina fatratra)
Brigitte (nitranga in-1) : Ny herisetra eo amin'ny mpivady no tena betsaka amin'ny fitarainana”, hoy Rakotomamonjy Brigitte, mpiasa sosialy ao amin'ny Tabita, nandritra ny andro iraisam-pirenena ho an' ny fianakaviana, omaly. (Ady amin’ny herisetra – Mirotsaka ihany koa ny fiangonana)
Tsaralalàna (nitranga in-1) : Ny talata 14 mey teo no tonga nitaraina teny amin'ny biraon'ny polisy misahana ny zaza tsy ampy taona, eny Tsaralalàna, ny renin'io zaza io. (Lazaina Avaradrano – Mpiandry omby voatondro ho nanolana zaza efa-taona)
hampahafantarana (nitranga in-1) : Omaly rahateo no tonga teto Mada­gasikara handinika miaraka amin'ny Cenit momba izany ireo manam-pahaizana manokana avy amin'ny Ceni ao Afrika Atsimo ka ny zoma no hampahafantarana ireo kandidà ny tena ho endrik'ity biletà tokana ity. (Fifidianana filoha – Mety ho latsaky ny 1 m indray ny halavan’ny biletà tokana)
takatry (nitranga in-1) : Azo lazaina fa takatry ny rehetra sady tsy niova tamin'ny vidiny tamin'ny andro mafana teo aloha itony lamba firakotra itony. (Fiatrehana ririnina – Tsy nisy fiovana ny vidin’ ny bodofotsy eny an-tsena)
nitarainana (nitranga in-1) : Rehefa azony anefa ny anarana dia entiny ampitahorana sy hakana vola any amin'ireto farany», hoy ihany Rabemazava Soa Jean naneho ny hakiviany amin'ireo olona mba nitarainana. (Mananara Avaratra – Misy ambadika ny raharaha andramena)
lavitry (nitranga in-1) : Ankohonana mirindra sy lavitry ny olana no tanjona”, hoy kosa Rakotovao Noro, Mpitandrina. (Ady amin’ny herisetra – Mirotsaka ihany koa ny fiangonana)
adikako (nitranga in-1) : 000 ny mpanaraka azy no mandrisika [zh] hihainoan'ny tanora shinoa ilay kabary: (Sary ofisialy avy amin'ny Trano Fotsy nalain'i Pete Souza) 奥巴马昨天在俄亥俄州立大学的毕业典礼上演讲，演讲的核心是“公民意识”。我把他的演讲稿匆匆翻译了下来，就是觉得，中国的年轻人，也许更应该接受这样在中国的课堂里接受不到的教育。 Ny fototry ny kabarim-pisokafan'ny taom-pianarana nataon'i Obama omaly tao amin'ny Oniversitem-panjakana ao Ohio dia ny ‘ny fahatsapana mahaolom-pirenena, adikako vinaninany tahaka izay ilay kabariny, satria tsapako fa mety tena mila karazam-panabeazana toy izany mihitsy n.... (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
worse (nitranga in-1) : “Lavenona Dragona” (@龙团一灰) naneho hevitra [efa voafafa ny hafatra niaviany],
[Being in] a socialist country, we cannot think about such things; the more you think about them, the worse you will feel. (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
mixte (nitranga in-1) : Namory ny OMC (Organe mixte de conception) izay ahitana ny Kaomandàn'ny borigadin'ny zandarimaria sy ny Kaomiseran'ny polisy ary nitarina tamin'ny tompon'andraikitry ny ala, ny Lehiben'ny distrika Raharison Mahatombo, tamin'ny volana avrily. (Mananara Avaratra – Misy ambadika ny raharaha andramena)
isafidianana (nitranga in-1) : Misy karazany azo isafidianana ihany koa izy”, hoy ireo mpanjifa. (Fiatrehana ririnina – Tsy nisy fiovana ny vidin’ ny bodofotsy eny an-tsena)
facebook (nitranga in-2) : Mpanoratra Tea Leaf Nation · Nandika Jentilisa
· vakio ato ny lahatsoratra nadika  [en] · hevitra (0) Zarao: facebook · twitter · reddit · StumbleUpon · delicious · Instapaper. (Fitantarana an-tSary Navoakan'ny Manomba-Maso An'i Palestina Farany Indrindra Ho Fahatsiarovana ny Nakba)
Kaomandy (nitranga in-3) : ny kolonely Rasolofo Lumène
Efa eo an-dalam-panoma­nana ny antontan-taratasy fangatahana ny hananganana sekoly fanofanana manamboninahitra ho an'ny zandarimariam-pirenena, araka ny nambaran'ny kolonely Rasolofo Lumène Fidèle, izay voatendry ho Kaomandin'ny sekoly sy ny fanofanana eo anivon'ny zandarimariam-pirenena. (Fanofanana manamboninahitra – Hangataka Akademia manokana ny zandarimariam-pirenena)
Dolin (nitranga in-1) : hifanakalo hevitra amin' ny Praiminisitra Omer Beri­ziky, ny filohan'ny Kaongresy, Mamy Rakoto­arivelo ary ny filohan'ny Filankevitra ambonin'ny tetezamita, ny jeneraly Dolin Rasolosoa mahakasika ny fiaraha-mitantana ny tetezamita aorian'ny fametraham-pialany, ny Filohan'ny tetezamita, Andry Rajoelina, anio hariva. (Fiaraha-mitantana ny tetezamita – Hampitovy tadin-dokanga Rajoelina, Beriziky, Rakotoarivelo ary Rasolosoa Dolin)
ASSM (nitranga in-1) : a (67) # LAZAN BETSILEO (78)
Vondrona C – ASSM (65) # T. (Basket ball N1B lehilahy – Mitarika vonjimaika ny TTS Analamanga sy ny JCM Morombe)
zon' (nitranga in-1) : Raha tsy misy ny zon'olombelona dia tsy misy ihany koa ny adidy aman'andraikitra. (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
dictatorship (nitranga in-1) : One generation after another, this is our traditional culture: dictatorship, authoritarianism, and intolerance of opposition. (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
Beri­ziky (nitranga in-1) : hifanakalo hevitra amin' ny Praiminisitra Omer Beri­ziky, ny filohan'ny Kaongresy, Mamy Rakoto­arivelo ary ny filohan'ny Filankevitra ambonin'ny tetezamita, ny jeneraly Dolin Rasolosoa mahakasika ny fiaraha-mitantana ny tetezamita aorian'ny fametraham-pialany, ny Filohan'ny tetezamita, Andry Rajoelina, anio hariva. (Fiaraha-mitantana ny tetezamita – Hampitovy tadin-dokanga Rajoelina, Beriziky, Rakotoarivelo ary Rasolosoa Dolin)
fampiakarana (nitranga in-1) : Ny tenany no miandraikitra ny fibaikoana ny sekolin'ny zandarimaria ao Ambositra sy Moramanga, ny fanofanana ho fampiakarana laharamboninahitra, ary ny fanofanana ho amin'ny fibaikoana alika, eny Ivato. (Fanofanana manamboninahitra – Hangataka Akademia manokana ny zandarimariam-pirenena)
Weibo (nitranga in-4) : Mpisera Sina Weibo @假装在纽约 manana ny ambaindainy, na “milaza tena ho any New York,” izay tia manaitaitra amin'ny ankapobeny izay miresaka matetika momba an' Etazonia ary manana mpanaraka mihoatra ny 470. (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
Didier (nitranga in-1) : nanohana ny fanambaran'ny «Troïka», rafitra mpanatanteraky ny Vondrona Sadc, izay nilaza ny tokony hisintahan'ny Filohan'ny tetezamita, Andry Rajoelina sy ny Filoha teo aloha, ny amiraly Didier Ratsiraka ary i Lalao Ravalomanana, amin'ny fifidianana Filoham-pirnena ihany koa ny Vondrona Eoropeana. (Vondrona Eoropeana – Mitsipaka ny filatsahan’i Lalao Ravalomanana, Ratsiraka, Rajoelina)
nahafehy (nitranga in-1) : «Tsy nandalo fianarana manokana momba ny sary izy nefa nahafehy teknika maro teo amin'ny sary. (Sary sy hosodoko – Hisokatra amin’ny fialan-tsasatra lehibe ny «sekolin’ny sary» an-dRaparivo)
Pantekôty (nitranga in-2) : Io no loha- tenin'ny fampisehoana voalohany hiarahan'i Nantenaina sy Shyn any an-drenivohitr'i Betsimisaraka, ny alahadin'ny Pantekôty 19 mey, hatao ao amin'ny kianja mitafo Soavita. (« Samy ngeza » – Hifandona eny Mahitsy i Fara John’s sy Onja)
Rice (nitranga in-1) : «Teo anivon' ny toeram-pikarohana Africa Rice sy ny FOFIFA no nahazoana ilay karazam- bary Nerica, nofidiana manokana noho ny singa ao anatiny sy ny hery entiny», hoy kosa Philippe Courbet, manam-pahaizana momba ny fambolena avy amin'ny ivon-toeram-pikarohan' ny Nestlé, any Abidjan. (Fikarohana – Nampahafantarina ny karazam-bary vaovao ho an’ny sakafo mahasalama)
taonan' (nitranga in-1) : ”
Ao amin'ny pejy Facebook no anoratan-dry zareo : Ny 15 Mey no manamarika ny faha-65 taonan'ny Nakba – fotoana namindrana monina Palestiniana 750. (Fitantarana an-tSary Navoakan'ny Manomba-Maso An'i Palestina Farany Indrindra Ho Fahatsiarovana ny Nakba)
nifanehitra (nitranga in-1) : Fomba fitenenana io, fa ny zava-misy dia tsy matetika no handrenesana hoe nisy tokantrano notafihin'ny jiolahy ka vantany vao niantso ireo fianakaviana lasibatra dia tonga vetivety ireo mpitandro ny filaminana ary nifanehitra dia nahasambotra olon-dratsy. (Ny aza voany)
hanovana (nitranga in-1) : Angamba ho an'ireo vao nahazo ny diplaoman'ny kolejy farany indrindra teo, ny tsindry mitambesatra an-dry zareo dia tsy hoe ahoana ny fomba hanovana ny firenena, fa ny hoe ahoana no ahafahana miavo-tena ao anatin'izao toe-karena mampalahelo ity. (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
hosodoko (nitranga in-3) : 56 taona nanaovana sary hosodoko, hankalazaina amin'ny taona ho avy ny faha-80 taona nahaterahan-dRaparivo Roland Ramaheninarivo, na Raparivo R. (Sary sy hosodoko – Hisokatra amin’ny fialan-tsasatra lehibe ny «sekolin’ny sary» an-dRaparivo)
fahatakarana (nitranga in-1) : Nanontany tena ny mpisera “Hula Baopei” (@呼啦啦啦宝宝_佩) : 当国内大学生一毕业便面临高房价、物价而不得不屈服于现实失去梦想时，美国青年却可以以祖国未来为己任，被赋予强大的公民意识，坚定不移的实现自己的梦想、承担国家发展之重任，我在想中国的未来在哪里？下一代的未来在哪里？ Raha milefitra manoloana ny zava-misy ny mpianatry ny kolejy shinoa ka tsy mahatadidy intsony ny nofinofiny manoloana ny fahalafosana sy ny tsy fahatakarana ny zo hanam-ponenana aorian'ny nandiavana ny kolejy, Afa-mametraka ny hoavin'ny tanindrazany ho iraka ataony manokana kosa ny tanora Amerikana; efa tsara volavola tao amin'ny fahatsa.... (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
nomen' (nitranga in-1) : Mpitia fanatanjahantena toy ny mpanazatra amin'ny lomano na mpamonjy voina na zandary ireo nanaraka ny fiofanana nomen'ny Federasiona frantsay tamin'ity taranja vaovao ity. (Fiofanana – Namokatra mpanazatra sivy ny Triathlon)
goes (nitranga in-1) : As for rights, whatever the civil servants say goes. (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
Ivato (nitranga in-1) : Ny tenany no miandraikitra ny fibaikoana ny sekolin'ny zandarimaria ao Ambositra sy Moramanga, ny fanofanana ho fampiakarana laharamboninahitra, ary ny fanofanana ho amin'ny fibaikoana alika, eny Ivato. (Fanofanana manamboninahitra – Hangataka Akademia manokana ny zandarimariam-pirenena)
hifanakalo (nitranga in-1) : hifanakalo hevitra amin' ny Praiminisitra Omer Beri­ziky, ny filohan'ny Kaongresy, Mamy Rakoto­arivelo ary ny filohan'ny Filankevitra ambonin'ny tetezamita, ny jeneraly Dolin Rasolosoa mahakasika ny fiaraha-mitantana ny tetezamita aorian'ny fametraham-pialany, ny Filohan'ny tetezamita, Andry Rajoelina, anio hariva. (Fiaraha-mitantana ny tetezamita – Hampitovy tadin-dokanga Rajoelina, Beriziky, Rakotoarivelo ary Rasolosoa Dolin)
hisintahan' (nitranga in-1) : nanohana ny fanambaran'ny «Troïka», rafitra mpanatanteraky ny Vondrona Sadc, izay nilaza ny tokony hisintahan'ny Filohan'ny tetezamita, Andry Rajoelina sy ny Filoha teo aloha, ny amiraly Didier Ratsiraka ary i Lalao Ravalomanana, amin'ny fifidianana Filoham-pirnena ihany koa ny Vondrona Eoropeana. (Vondrona Eoropeana – Mitsipaka ny filatsahan’i Lalao Ravalomanana, Ratsiraka, Rajoelina)
Ratsiraka (nitranga in-1) : nanohana ny fanambaran'ny «Troïka», rafitra mpanatanteraky ny Vondrona Sadc, izay nilaza ny tokony hisintahan'ny Filohan'ny tetezamita, Andry Rajoelina sy ny Filoha teo aloha, ny amiraly Didier Ratsiraka ary i Lalao Ravalomanana, amin'ny fifidianana Filoham-pirnena ihany koa ny Vondrona Eoropeana. (Vondrona Eoropeana – Mitsipaka ny filatsahan’i Lalao Ravalomanana, Ratsiraka, Rajoelina)
hoentina (nitranga in-1) : Omby dimy tamin'ireo am-polony saika hoentina hamidy no nisy nangalatra tao Ankazobe, ny 13 mey teo tokony ho tamin'ny 10 ora alina. (Tapatapany)
Sabine (nitranga in-1) : Mijanona amin'ny vidiny teo aloha ihany ny vidiny na dia fotoana mampandeha ny tsena aza izao », hoy Endrininosy Sabine, mpivarotra, etsy Analakely. (Fiatrehana ririnina – Tsy nisy fiovana ny vidin’ ny bodofotsy eny an-tsena)
fahatsapana (nitranga in-3) : 000 ny mpanaraka azy no mandrisika [zh] hihainoan'ny tanora shinoa ilay kabary: (Sary ofisialy avy amin'ny Trano Fotsy nalain'i Pete Souza) 奥巴马昨天在俄亥俄州立大学的毕业典礼上演讲，演讲的核心是“公民意识”。我把他的演讲稿匆匆翻译了下来，就是觉得，中国的年轻人，也许更应该接受这样在中国的课堂里接受不到的教育。 Ny fototry ny kabarim-pisokafan'ny taom-pianarana nataon'i Obama omaly tao amin'ny Oniversitem-panjakana ao Ohio dia ny ‘ny fahatsapana mahaolom-pirenena, adikako vinaninany tahaka izay ilay kabariny, satria tsapako fa mety tena mila karazam-panabeazana toy izany mihitsy n.... (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
nisian' (nitranga in-1) : “Hatramin'ny nisian'ny tetikasa niaraka tamin'ny Babeo dia fitarainana 390 no voaray. (Ady amin’ny herisetra – Mirotsaka ihany koa ny fiangonana)
Ohio (nitranga in-1) : 000 ny mpanaraka azy no mandrisika [zh] hihainoan'ny tanora shinoa ilay kabary: (Sary ofisialy avy amin'ny Trano Fotsy nalain'i Pete Souza) 奥巴马昨天在俄亥俄州立大学的毕业典礼上演讲，演讲的核心是“公民意识”。我把他的演讲稿匆匆翻译了下来，就是觉得，中国的年轻人，也许更应该接受这样在中国的课堂里接受不到的教育。 Ny fototry ny kabarim-pisokafan'ny taom-pianarana nataon'i Obama omaly tao amin'ny Oniversitem-panjakana ao Ohio dia ny ‘ny fahatsapana mahaolom-pirenena, adikako vinaninany tahaka izay ilay kabariny, satria tsapako fa mety tena mila karazam-panabeazana toy izany mihitsy n.... (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
halaly (nitranga in-1) : Mametraka an-tsary ny sakany sy ny lavany ary ny halalin'ny famindra-monina sy ny fahaverezan'ny tany Palestiniana ity sary vaovao ity. (Fitantarana an-tSary Navoakan'ny Manomba-Maso An'i Palestina Farany Indrindra Ho Fahatsiarovana ny Nakba)
tsindrilenta (nitranga in-1) : Ny zava-dehibe kokoa, maneho ny fahafaha-manao tsindrilenta sy mahaleo tena rehefa miatrika ny fahefam-panjakana izany, fahafaha-manao izay miainga avy amin'ny fahatsapana fa manana anjara toerana eo amin'ny firenena, na dia mety ho olona bitika aza izy. (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
Zazah (nitranga in-1) : r sy Tiana Raparivo, eo amin'ny hosodoko ary ireo sanganasan'i Zazah R. (Sary sy hosodoko – Hisokatra amin’ny fialan-tsasatra lehibe ny «sekolin’ny sary» an-dRaparivo)
Praimi­nisitra (nitranga in-1) : Voafaritra ao anatin' izany andininy izany fa «raha handray anjara amin' ny fifi-dianana ny Filohan'ny tetezamita sy ny Praimi­nisitra ary ireo mpikambana eo anivon'ny governemanta dia tokony hiala amin'ny toerany 60 andro mialohan'ny daty hanatanterahana izany». (Fiaraha-mitantana ny tetezamita – Hampitovy tadin-dokanga Rajoelina, Beriziky, Rakotoarivelo ary Rasolosoa Dolin)
1246 (nitranga in-1) : Nisy ny fampitahana ny vokatra avy amin'ny karazam-bary vaovao tamin' ny vary, efa mahazatra ireo tantsaha, ka anisan'ireo natolotra tamin'izany ny karazam-bary Nerica 1,2,4,6, ary 15, ny X-Jigna ary ny Yunkeng. (Fikarohana – Nampahafantarina ny karazam-bary vaovao ho an’ny sakafo mahasalama)
Odette (nitranga in-1) : Raisinay am-pitiavana izay foin'ny tsara sitra-po sao mbola azo avotana ihany ny ainy, izay voalohan-janakay amin'ny zaza roa”, hoy Randriambololona Marie Odette, reniny. (Hopitaly Ambohimiandra – Zaza marary mafy mila famonjena)
anatiny (nitranga in-1) : «Teo anivon' ny toeram-pikarohana Africa Rice sy ny FOFIFA no nahazoana ilay karazam- bary Nerica, nofidiana manokana noho ny singa ao anatiny sy ny hery entiny», hoy kosa Philippe Courbet, manam-pahaizana momba ny fambolena avy amin'ny ivon-toeram-pikarohan' ny Nestlé, any Abidjan. (Fikarohana – Nampahafantarina ny karazam-bary vaovao ho an’ny sakafo mahasalama)
regardless (nitranga in-1) : This is ‘soy-sauce vat' China, where everything ends up black [corrupt] regardless of how it started out. (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
hanatanterahana (nitranga in-2) : Voafaritra ao anatin' izany andininy izany fa «raha handray anjara amin' ny fifi-dianana ny Filohan'ny tetezamita sy ny Praimi­nisitra ary ireo mpikambana eo anivon'ny governemanta dia tokony hiala amin'ny toerany 60 andro mialohan'ny daty hanatanterahana izany». (Mananara Avaratra – Misy ambadika ny raharaha andramena)
Farah (nitranga in-1) : Ny gadona salegy no tena ahafantarana an'i Farah John's ary anisan' ny mampiavaka azy ny fahaizany manetsika sy mampitsinjaka ireo mpijery. (« Samy ngeza » – Hifandona eny Mahitsy i Fara John’s sy Onja)
nanaovana (nitranga in-5) : Mbola tsy fantatra kosa anefa izay tena tetibidin'ireo entana very ireo satria mbola tsy nanaovana fanadihadiana izy mivady vokatry ny hatairana nahazo azy ireo», hoy ihany ny fanazavan' ny zandary, avy etsy Ambohi­bao. (Sary sy hosodoko – Hisokatra amin’ny fialan-tsasatra lehibe ny «sekolin’ny sary» an-dRaparivo)
Philippe (nitranga in-1) : «Teo anivon' ny toeram-pikarohana Africa Rice sy ny FOFIFA no nahazoana ilay karazam- bary Nerica, nofidiana manokana noho ny singa ao anatiny sy ny hery entiny», hoy kosa Philippe Courbet, manam-pahaizana momba ny fambolena avy amin'ny ivon-toeram-pikarohan' ny Nestlé, any Abidjan. (Fikarohana – Nampahafantarina ny karazam-bary vaovao ho an’ny sakafo mahasalama)
anatina (nitranga in-1) : Mety hizara ao anatina efitra roa samy hafa kosa anefa izy ireo. (Fifidianana filoha – Mety ho latsaky ny 1 m indray ny halavan’ny biletà tokana)
lefitry (nitranga in-1) : Nana- marina izay ny profesora Roger Randrianasolo, lehiben'ny sampan-
draharaha misahana ny sakafo eo anivon'ny mini- siteran'ny Fahasalamana sady filoha lefitry ny Filan- kevitra siantifika eo anivon' ny ivon-toeran'ny Nestlé, aty Afrika. (Fikarohana – Nampahafantarina ny karazam-bary vaovao ho an’ny sakafo mahasalama)
hampitsaharan' (nitranga in-1) : Antso, noho izany, no nalefan'ny Lehiben'ny distrika tamin'ny mponina mba hampitsaharan'izy ireo ny fampanofana fiara na lakana na trano na tokontany amin'ny mpanao andramena. (Mananara Avaratra – Misy ambadika ny raharaha andramena)
fizotran' (nitranga in-1) : Manova tanteraka ny fizotran'ny fifidianana io firotsahan'ny telo tonta io ary mifanohitra amin'ny fifanarahana nisy teo aloha», araka ny fanambaràna nataon'i Catherine Ashton, tompon'andraikitra ambony eo anivon'ny Vondrona Eoropeana, omaly. (Vondrona Eoropeana – Mitsipaka ny filatsahan’i Lalao Ravalomanana, Ratsiraka, Rajoelina)
notafihy (nitranga in-1) : Fomba fitenenana io, fa ny zava-misy dia tsy matetika no handrenesana hoe nisy tokantrano notafihin'ny jiolahy ka vantany vao niantso ireo fianakaviana lasibatra dia tonga vetivety ireo mpitandro ny filaminana ary nifanehitra dia nahasambotra olon-dratsy. (Ny aza voany)
distrika (nitranga in-4) : Efa tonga nijery ifotony ny fahavoazana, ny lehiben'ny distrika ao Antanifotsy. (Mananara Avaratra – Misy ambadika ny raharaha andramena)
holanian' (nitranga in-1) : Araka ny voafaritry ny sori-dalana dia «tokony hisy ny lalàna holanian'ny parlemantan'ny tetezamita afahana mampihatra ilay fiaraha-mitantana telo loha ». (Fiaraha-mitantana ny tetezamita – Hampitovy tadin-dokanga Rajoelina, Beriziky, Rakotoarivelo ary Rasolosoa Dolin)
fifampizarana (nitranga in-1) : ity lahatsoratra ity dia navoakan'i Rachel Wang originally tao amin'ny Tea Leaf Nation (Firenena Ravin-dite) tamin'ny 13 Mey 2013 ary navoaka indray ho anisan'ny fifanarahana fifampizarana votoaty [Endrika natao nanara-bolontany hahamora ny fandikan-dahatsoratra]. (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
mora (nitranga in-1) : Tsy misy mihevitra ny hiala mora foana izany fa dia mitady izay fomba rehetra hanemorana ilay fotoana fametraham-pialana foana aloha. (Kajikajy)
simban' (nitranga in-1) : Fitiliana tamin'ny scanner no nahitana fa simban'ny otrikaretina ireo “alvéoles” amin'ny ilan-tratrany havanana. (Hopitaly Ambohimiandra – Zaza marary mafy mila famonjena)
Kudeta (nitranga in-1) : ireo mpanazatra vao nahavita fiofanana amin'ny taranja Triathlon
Natao teny amin'ny Kudeta, tetsy amin'ny Hotel Carlton, omaly ny fizaràna ny mari-pahaizana ho an' ireo sivy mirahalahy niofana ho mpanazatra, dingana voalohany eo amin'ny taranja Triathlon. (Fiofanana – Namokatra mpanazatra sivy ny Triathlon)
more (nitranga in-1) : “Lavenona Dragona” (@龙团一灰) naneho hevitra [efa voafafa ny hafatra niaviany],
iantsonan' (nitranga in-1) : Any Sina matetika ny seranana iantsonan'ireo andramena avy aty Madagasikara. (Mananara Avaratra – Misy ambadika ny raharaha andramena)
Maso (nitranga in-1) : «Na ny toerana misy ny tahiry, any amin'ny dimy kilaometatra miala eto amin'ny tanànan'i Mananara aza dia fantatry ny rehetra», hoy ihany ity filohan'ny fikambanana Maso (Mananara Solidaire) ity, nanohy ny teniny. (Mananara Avaratra – Misy ambadika ny raharaha andramena)
Rabesetra (nitranga in-1) : Heritiana Rabesetra. (Mananara Avaratra – Misy ambadika ny raharaha andramena)
friperia (nitranga in-2) : Ireo bodofotsy friperia no tena mahaliana ny olona na amin'ny vidiny na amin'ny kalitaony. (Fiatrehana ririnina – Tsy nisy fiovana ny vidin’ ny bodofotsy eny an-tsena)
tanànan' (nitranga in-2) : sahalan'ny efa mahay tsianjery ny tao an-tranon' ilay Ben'ny tanàna voatafika tety amin'ny faritra Ambohibao mihitsy ireo jiolahy, raha ny filazan' ireo zandary
Dimy lahy, nitondra basy poleta roa sy sabatra, no nanafika ny tranon'ny Ben'ny tanànan' Ambohibao, ny alin'ny talata hifoha omaly alarobia, tokony ho tamin'ny 11 ora alina. (Mananara Avaratra – Misy ambadika ny raharaha andramena)
Roger (nitranga in-2) : Ity tanàna ity, izay manana an'i Zouzou Andriafenomanananiaina sy Roger Andrianambinina, samy avy ao amin'ny ECA sy kintan'ny Triathlon eto Madagasikara ary manana traikefa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. (Fikarohana – Nampahafantarina ny karazam-bary vaovao ho an’ny sakafo mahasalama)
mamariparitra (nitranga in-1) : Araka ny fanambarana avy amin'ny Fiadidiana ny tetezamita, omaly, dia hiompana amin'ny fampiharàna ny andininy faha-14 ao
naharariany (nitranga in-1) : Very 10 kilao ity zazavavy ity, hatramin'ny naharariany. (Hopitaly Ambohimiandra – Zaza marary mafy mila famonjena)
nahasambotra (nitranga in-1) : Fomba fitenenana io, fa ny zava-misy dia tsy matetika no handrenesana hoe nisy tokantrano notafihin'ny jiolahy ka vantany vao niantso ireo fianakaviana lasibatra dia tonga vetivety ireo mpitandro ny filaminana ary nifanehitra dia nahasambotra olon-dratsy. (Ny aza voany)
Mananara (nitranga in-10) : mampiahiahy ny zanak'i Mananara Avaratra ny fihetsiky ny manampahefana sasany, izay toa tsy taitra mahita ny fandripahana sy fanondranana ny andramena. (Mananara Avaratra – Misy ambadika ny raharaha andramena)
rights (nitranga in-1) : As for rights, whatever the civil servants say goes. (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
this (nitranga in-1) : One generation after another, this is our traditional culture: dictatorship, authoritarianism, and intolerance of opposition. (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
originally (nitranga in-1) : ity lahatsoratra ity dia navoakan'i Rachel Wang originally tao amin'ny Tea Leaf Nation (Firenena Ravin-dite) tamin'ny 13 Mey 2013 ary navoaka indray ho anisan'ny fifanarahana fifampizarana votoaty [Endrika natao nanara-bolontany hahamora ny fandikan-dahatsoratra]. (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
hihainoana (nitranga in-1) : Efa manana ivon-toerana natao handraisana sy hihainoana ny olona iharan'izany ity farany, etsy amin'ny foibe Tabita Fjkm, etsy Ampandrana. (Ady amin’ny herisetra – Mirotsaka ihany koa ny fiangonana)
Colombie (nitranga in-1) : “ Efa miomana ny handray anjara amin'ny Lalao Olympika, hatao any Colombie, amin'ny taona 2016 isika. (Fiofanana – Namokatra mpanazatra sivy ny Triathlon)
servants (nitranga in-1) : As for rights, whatever the civil servants say goes. (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
sanganasan' (nitranga in-1) : r sy Tiana Raparivo, eo amin'ny hosodoko ary ireo sanganasan'i Zazah R. (Sary sy hosodoko – Hisokatra amin’ny fialan-tsasatra lehibe ny «sekolin’ny sary» an-dRaparivo)
mialohan' (nitranga in-1) : Voafaritra ao anatin' izany andininy izany fa «raha handray anjara amin' ny fifi-dianana ny Filohan'ny tetezamita sy ny Praimi­nisitra ary ireo mpikambana eo anivon'ny governemanta dia tokony hiala amin'ny toerany 60 andro mialohan'ny daty hanatanterahana izany». (Fiaraha-mitantana ny tetezamita – Hampitovy tadin-dokanga Rajoelina, Beriziky, Rakotoarivelo ary Rasolosoa Dolin)
kalach (nitranga in-1) : Ny tsy manam-basy kalach sy P. (Ny aza voany)
kianjaben' (nitranga in-1) : Hifampidera ny talentany avy, amin' ny alalan'ny mozika mafana ao amin'ny kianjaben'i Mahitsy izy mirahavavy ireto. (« Samy ngeza » – Hifandona eny Mahitsy i Fara John’s sy Onja)
Lumène (nitranga in-2) : ny kolonely Rasolofo Lumène
Rabemazava (nitranga in-5) : «Izahay miteny izao tsy misy »parapluie » fa Andriamanitra an-tampon'ny loha no ianteherana», hoy Rabemazava Soa Jean, raha namaky bantsilana fa fanta-poko, fanta-pirenena ny tompon'ny sambo anondranana ireo andramena any Mananara Avaratra. (Mananara Avaratra – Misy ambadika ny raharaha andramena)
nalay (nitranga in-1) : 000 ny mpanaraka azy no mandrisika [zh] hihainoan'ny tanora shinoa ilay kabary: (Sary ofisialy avy amin'ny Trano Fotsy nalain'i Pete Souza) 奥巴马昨天在俄亥俄州立大学的毕业典礼上演讲，演讲的核心是“公民意识”。我把他的演讲稿匆匆翻译了下来，就是觉得，中国的年轻人，也许更应该接受这样在中国的课堂里接受不到的教育。 Ny fototry ny kabarim-pisokafan'ny taom-pianarana nataon'i Obama omaly tao amin'ny Oniversitem-panjakana ao Ohio dia ny ‘ny fahatsapana mahaolom-pirenena, adikako vinaninany tahaka izay ilay kabariny, satria tsapako fa mety tena mila karazam-panabeazana toy izany mihitsy n.... (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
sense (nitranga in-1) : Nanoratra toy izao ny mpisera Weibo “Bandy goavana mandeha sahala amin'ny Dragona sy ny Tigra” (@大背头龙行虎步) [efa voafafa ny hafatra amin'ny teny shinoa niaviany]:
The youth all start out hoping for a sense of citizenship, but after hitting the wall over and over again in society, they turn towards nepotism. (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
manaitaitra (nitranga in-1) : Mpisera Sina Weibo @假装在纽约 manana ny ambaindainy, na “milaza tena ho any New York,” izay tia manaitaitra amin'ny ankapobeny izay miresaka matetika momba an' Etazonia ary manana mpanaraka mihoatra ny 470. (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
triathlon (nitranga in-2) : Andrasana ihany koa ny lalaon'ny Cjsoi, hatao atsy La Réunion”, hoy Raoelina Andriambololona Tiana, filohan'ny federasionan'ny triathlon. (Fiofanana – Namokatra mpanazatra sivy ny Triathlon)
fanambaràna (nitranga in-2) : Manova tanteraka ny fizotran'ny fifidianana io firotsahan'ny telo tonta io ary mifanohitra amin'ny fifanarahana nisy teo aloha», araka ny fanambaràna nataon'i Catherine Ashton, tompon'andraikitra ambony eo anivon'ny Vondrona Eoropeana, omaly. (Mananara Avaratra – Misy ambadika ny raharaha andramena)
Antsirabe (nitranga in-3) : Ao Moramanga ihany ity sekoly vaovao atsangana ity araka ny fantatra, ka aorian' ny fitsanganan'izany dia tsy ho any Antsirabe intsony ny mpianatra ho manamboninahitra zandary no hiofana. (Fiofanana – Namokatra mpanazatra sivy ny Triathlon)
turn (nitranga in-1) : Nanoratra toy izao ny mpisera Weibo “Bandy goavana mandeha sahala amin'ny Dragona sy ny Tigra” (@大背头龙行虎步) [efa voafafa ny hafatra amin'ny teny shinoa niaviany]:
Ambohimiandra (nitranga in-4) : mendrika miatrika ny fitsaboana eny amin'ny hopitaly Ambohimiandra. (Hopitaly Ambohimiandra – Zaza marary mafy mila famonjena)
Mirarakompana (nitranga in-1) : Mirarakompana ny vaky trano, asa fanendahana, fanafihana amin'ny endriny samihafa, fandrobàna tsy tambo isaina… tao anatin'ny taona vitsy izao. (Ny aza voany)
handrenesana (nitranga in-1) : Fomba fitenenana io, fa ny zava-misy dia tsy matetika no handrenesana hoe nisy tokantrano notafihin'ny jiolahy ka vantany vao niantso ireo fianakaviana lasibatra dia tonga vetivety ireo mpitandro ny filaminana ary nifanehitra dia nahasambotra olon-dratsy. (Ny aza voany)
niofana (nitranga in-1) : ireo mpanazatra vao nahavita fiofanana amin'ny taranja Triathlon
vinaninany (nitranga in-1) : 000 ny mpanaraka azy no mandrisika [zh] hihainoan'ny tanora shinoa ilay kabary: (Sary ofisialy avy amin'ny Trano Fotsy nalain'i Pete Souza) 奥巴马昨天在俄亥俄州立大学的毕业典礼上演讲，演讲的核心是“公民意识”。我把他的演讲稿匆匆翻译了下来，就是觉得，中国的年轻人，也许更应该接受这样在中国的课堂里接受不到的教育。 Ny fototry ny kabarim-pisokafan'ny taom-pianarana nataon'i Obama omaly tao amin'ny Oniversitem-panjakana ao Ohio dia ny ‘ny fahatsapana mahaolom-pirenena, adikako vinaninany tahaka izay ilay kabariny, satria tsapako fa mety tena mila karazam-panabeazana toy izany mihitsy n.... (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
Ramaheninarivo (nitranga in-1) : 56 taona nanaovana sary hosodoko, hankalazaina amin'ny taona ho avy ny faha-80 taona nahaterahan-dRaparivo Roland Ramaheninarivo, na Raparivo R. (Sary sy hosodoko – Hisokatra amin’ny fialan-tsasatra lehibe ny «sekolin’ny sary» an-dRaparivo)
Eoropeana (nitranga in-4) : nanohana ny fanambaran'ny «Troïka», rafitra mpanatanteraky ny Vondrona Sadc, izay nilaza ny tokony hisintahan'ny Filohan'ny tetezamita, Andry Rajoelina sy ny Filoha teo aloha, ny amiraly Didier Ratsiraka ary i Lalao Ravalomanana, amin'ny fifidianana Filoham-pirnena ihany koa ny Vondrona Eoropeana. (Vondrona Eoropeana – Mitsipaka ny filatsahan’i Lalao Ravalomanana, Ratsiraka, Rajoelina)
tangalamena (nitranga in-1) : Ny tangalamena Bonsantiry dia nivaky fa «botry sy sambo kely mahazaka entana 50 hatramin'ny 100 taonina miisa am-polony isam-bolana no mivoaka ny reniranon'i Managnara, mitondra andramena aondrana any an-tsambo efa miandry eny afovoan-dranomasina tsy lavitra ny morontsirak'i Mananara». (Mananara Avaratra – Misy ambadika ny raharaha andramena)
after (nitranga in-2) : Nanoratra toy izao ny mpisera Weibo “Bandy goavana mandeha sahala amin'ny Dragona sy ny Tigra” (@大背头龙行虎步) [efa voafafa ny hafatra amin'ny teny shinoa niaviany]:
Ivarary (nitranga in-1) : Voaroba i Verezantsoro
Tsy misy afa-tsy 4x4 ny fiara mifamezivezy ao an-tanàna Toerana telo no tena ivoahan'ny andramena ao Mananara Avaratra, dia ny ao amin'ny fokontany Enara, kaominina Antananivo, fokontany Ivarary, ao amin'ny kaominina Sandrakatsy ary ny manodidina ny fokontany Antevialabe, ao amin'ny kaominina Antanambe. (Mananara Avaratra – Misy ambadika ny raharaha andramena)
noraisy (nitranga in-1) : Fanapahan-kevitra noraisin'ny Cenit, izay nomena nodinihin'ny governemantan'ny tetezamita io. (Sombiny)
Andriambololona (nitranga in-1) : Andrasana ihany koa ny lalaon'ny Cjsoi, hatao atsy La Réunion”, hoy Raoelina Andriambololona Tiana, filohan'ny federasionan'ny triathlon. (Fiofanana – Namokatra mpanazatra sivy ny Triathlon)
Antananivo (nitranga in-1) : Voaroba i Verezantsoro
such (nitranga in-1) : “Lavenona Dragona” (@龙团一灰) naneho hevitra [efa voafafa ny hafatra niaviany],
tetiandro (nitranga in-1) : «Tsy misy tetiandro mazava ny fahatongavan'ny sambo fa rehefa voaangona ny entana dia vonona io. (Mananara Avaratra – Misy ambadika ny raharaha andramena)
Barphil (nitranga in-2) : Barphil Andriantsiferanarivo. (Fiofanana – Namokatra mpanazatra sivy ny Triathlon)
hikitikitihana (nitranga in-1) : Vao tsy ela anefa izay no samy nanizingizina ny tokony tsy hikitikitihana intsony ny lisitra ofisialin'ireo kandida 41 hiatrika ny fifidianana filoham-pirenena navoakan'ny Fitsarana manokana misahana ny raharaham-pifidianana ny Filohan'ny tetezamita, Andry Rajoelina sy ny Filoha teo aloha, Marc Ravalomanana. (Vondrona Eoropeana – Mitsipaka ny filatsahan’i Lalao Ravalomanana, Ratsiraka, Rajoelina)
nalefa (nitranga in-1) : Vao nalefa any amin'ny minisiteran'ny Foloalindahy ny fangatahana izany, araka ny tsilian-tsofina. (Fanofanana manamboninahitra – Hangataka Akademia manokana ny zandarimariam-pirenena)
mpony (nitranga in-1) : Na samy manana ny hanitra ho azy aza, anisan' ny andrasan'ny mponin'i Toamasina amin'ity fampi- sehoana ity ny fampiaraham- peon'izy mirahalahy. (Pantekôty Toamasina – Hiray sehatra i Nantenaina sy Shyn)
Hifampidera (nitranga in-1) : Hifampidera ny talentany avy, amin' ny alalan'ny mozika mafana ao amin'ny kianjaben'i Mahitsy izy mirahavavy ireto. (« Samy ngeza » – Hifandona eny Mahitsy i Fara John’s sy Onja)
dikanteny (nitranga in-1) : 000 sy fanehoan-kevitra manakaiky ny 6000 tao anatin'ny roa andro ny hafatra nalefan'i ”Milaza tena ho eto New York”, sy ny dikantenin'ny kabary. (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
nanondro (nitranga in-1) : Rehefa natao ny famotorana azy dia nanondro olona iray hafa izy ka tany Bongolava no nahatrarana ilay olona io », hoy ny tatitra avy amin'ny polisim-pirenena. (Famonoana sinoa vavy – Tafakatra 11 ireo voasambotra, vehivavy iray karohina fatratra)
anaovan' (nitranga in-1) : Tapaka tamin'izany fa hatao ny andrimasom-pokonolona any amin'ireo toerana tena anaovan'ireo mpandroba ny harem-pirenena ny asa ratsiny. (Mananara Avaratra – Misy ambadika ny raharaha andramena)
basket (nitranga in-1) : nanomboka ny alatsinainy teo, tany Toliara, ny fiadiana ny amboaran'i Madagasikara ho an'ny basket N1B, sokajy lehilahy. (Basket ball N1B lehilahy – Mitarika vonjimaika ny TTS Analamanga sy ny JCM Morombe)
Hampiasaina (nitranga in-1) : Hampiasaina koa ny mpitsikilo (agent de renseignement) izay hanaitra ny mpitandro ny filaminana, arakaraka ny zava-mitranga. (Mananara Avaratra – Misy ambadika ny raharaha andramena)
SPORTING (nitranga in-1) : m (71)
Vondrona A- SPORTING (76) # ASC 44 (53) Vondrona D – A. (Basket ball N1B lehilahy – Mitarika vonjimaika ny TTS Analamanga sy ny JCM Morombe)
Rajaonson (nitranga in-1) : Ligy vaovao
Omaly ihany koa no nampahafantatra ny fijoroan' ny ligin'ny triathlon ao Antsirabe ka Rajaonson Patrick no filohany. (Fiofanana – Namokatra mpanazatra sivy ny Triathlon)
fandraràna (nitranga in-2) : Toa very fanahy mbola velona ny any Mananara Avaratra mahita maso ny fitrandrahana sy fanondranana tsy amin-tahotra ny andramena, na dia efa namoaka didy fandraràna izany aza ny fitondrana foibe. (Mananara Avaratra – Misy ambadika ny raharaha andramena)
niantombohan' (nitranga in-1) : Tsy fantatra marina izay niantombohan'ny loza. (Tapatapany)
Nation (nitranga in-2) : ity lahatsoratra ity dia navoakan'i Rachel Wang originally tao amin'ny Tea Leaf Nation (Firenena Ravin-dite) tamin'ny 13 Mey 2013 ary navoaka indray ho anisan'ny fifanarahana fifampizarana votoaty [Endrika natao nanara-bolontany hahamora ny fandikan-dahatsoratra]. (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
Soavita (nitranga in-1) : Io no loha- tenin'ny fampisehoana voalohany hiarahan'i Nantenaina sy Shyn any an-drenivohitr'i Betsimisaraka, ny alahadin'ny Pantekôty 19 mey, hatao ao amin'ny kianja mitafo Soavita. (Pantekôty Toamasina – Hiray sehatra i Nantenaina sy Shyn)
hanamoramorana (nitranga in-1) : Na koa mitady fomba mba hanamoramorana kokoa ny aorian'ilay fametraham-pialana. (Kajikajy)
Sadc (nitranga in-1) : nanohana ny fanambaran'ny «Troïka», rafitra mpanatanteraky ny Vondrona Sadc, izay nilaza ny tokony hisintahan'ny Filohan'ny tetezamita, Andry Rajoelina sy ny Filoha teo aloha, ny amiraly Didier Ratsiraka ary i Lalao Ravalomanana, amin'ny fifidianana Filoham-pirnena ihany koa ny Vondrona Eoropeana. (Vondrona Eoropeana – Mitsipaka ny filatsahan’i Lalao Ravalomanana, Ratsiraka, Rajoelina)
tetibidy (nitranga in-1) : Mbola tsy fantatra kosa anefa izay tena tetibidin'ireo entana very ireo satria mbola tsy nanaovana fanadihadiana izy mivady vokatry ny hatairana nahazo azy ireo», hoy ihany ny fanazavan' ny zandary, avy etsy Ambohi­bao. (Ambohibao Antehiroka – Adiny telo no nampihorohoroan’ny jiolahy ny Ben’ny tanàna mivady)
Mada­gasikara (nitranga in-1) : Omaly rahateo no tonga teto Mada­gasikara handinika miaraka amin'ny Cenit momba izany ireo manam-pahaizana manokana avy amin'ny Ceni ao Afrika Atsimo ka ny zoma no hampahafantarana ireo kandidà ny tena ho endrik'ity biletà tokana ity. (Fifidianana filoha – Mety ho latsaky ny 1 m indray ny halavan’ny biletà tokana)
ivoahan' (nitranga in-1) : Voaroba i Verezantsoro
Natao (nitranga in-1) : ireo mpanazatra vao nahavita fiofanana amin'ny taranja Triathlon
feel (nitranga in-1) : “Lavenona Dragona” (@龙团一灰) naneho hevitra [efa voafafa ny hafatra niaviany],
anatinao (nitranga in-1) : Raha miaina amin'ny firenena sosialista isika dia tsy afa-mieritreritra zavatra tahaka izany; fa arakaraky ny hieritreretanao azy ireny no hahatsapanao zavatra ratsiratsy kokoa [any anatinao any]. (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
Enara (nitranga in-1) : Voaroba i Verezantsoro
fampanofana (nitranga in-1) : Antso, noho izany, no nalefan'ny Lehiben'ny distrika tamin'ny mponina mba hampitsaharan'izy ireo ny fampanofana fiara na lakana na trano na tokontany amin'ny mpanao andramena. (Mananara Avaratra – Misy ambadika ny raharaha andramena)
might (nitranga in-1) : The burdens of tradition are way too heavy; democracy might be another century away. (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
2013 (nitranga in-2) : ity lahatsoratra ity dia navoakan'i Rachel Wang originally tao amin'ny Tea Leaf Nation (Firenena Ravin-dite) tamin'ny 13 Mey 2013 ary navoaka indray ho anisan'ny fifanarahana fifampizarana votoaty [Endrika natao nanara-bolontany hahamora ny fandikan-dahatsoratra]. (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
Sina (nitranga in-2) : Any Sina matetika ny seranana iantsonan'ireo andramena avy aty Madagasikara. (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
them (nitranga in-1) : “Lavenona Dragona” (@龙团一灰) naneho hevitra [efa voafafa ny hafatra niaviany],
Ayoub (nitranga in-1) : org/disappearing-palestine
Ity sary manaraka ity ihany koa dia hita ao amin'ny tranonkalany (tsindrio raha te-hahita ny sary lehibe kokoa) Hatsaram-panahin'ny VisualizingPalestine Mpanoratra Joey Ayoub · Nandika Jentilisa
Rabearimahazo (nitranga in-1) : Rindra Rabearimahazo. (Lazaina Avaradrano – Mpiandry omby voatondro ho nanolana zaza efa-taona)
they (nitranga in-1) : Nanoratra toy izao ny mpisera Weibo “Bandy goavana mandeha sahala amin'ny Dragona sy ny Tigra” (@大背头龙行虎步) [efa voafafa ny hafatra amin'ny teny shinoa niaviany]:
Nilaza (nitranga in-1) : Nilaza ny heviny [zh] i Yin Hong (@尹鸿), zokiolona mpanatanteraky ny Sekolin'ny fanaovan-gazety sy ny fifandraisana Tsinghua:
虽然不算是一篇最好的讲演，但公民意识表述很清楚：每一个人都拥有天赋人权，所以每一个人也都具有天赋义务。这就是公民。没有人权，就就不能有义务。权力和义务是相对对等的。 Na dia tsy io aza no kabary tsara indrindra, dia voasoritra mazava ao tsara kosa ny ‘fanaitairana mahaolom-pirenena': manana zo voajanahary ny rehetra, noho izany manana andraikitra voajanahary koa ny rehetra. (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
demokrasia (nitranga in-1) : Mavesatra loatra ny vesatry ny nentim-paharazana; mety hoe efa taonjato hafa izany demokrasia izany. (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
Verezantsoro (nitranga in-2) : Voaroba i Verezantsoro
vitany (nitranga in-1) : Ny tsirairay ve moa tsy efa mba miezaka manao izay fomba hahafahana misoroka ny fandrobàna ataon'ny jiolahy, saingy tsy vitany irery izany. (Ny aza voany)
azon' (nitranga in-1) : Mitovy koa ny isa azon'ny Fandrefiala sy ny ekipan' ny Dream Team (vondrona B), samy avy eto Analamanga ary samy nahazo isa 5. (Basket ball N1B lehilahy – Mitarika vonjimaika ny TTS Analamanga sy ny JCM Morombe)
lazay (nitranga in-1) : Tahaka ny zo moa dia lasa avokoa izay lazain'ny mpiasam-panjakana. (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
Sporting (nitranga in-1) : m (65) # Sporting (64)
Vondrona A : Cosmos (76) # A. (Basket ball N1B lehilahy – Mitarika vonjimaika ny TTS Analamanga sy ny JCM Morombe)
Abidjan (nitranga in-2) : Nisy ny andrana karazam-bary vaovao izay natao tany Anjepy – Manjakandriana, ny volana oktobra 2012, vokatry ny fiaraha-miasan' ny orinasa Nestlé sy ny ivon-toeram-pikarohana ho an'ny fampandrosoana ny eny ambanivohitra, ny foibe fikarohana momba ny fambolena (FOFIFA), ny ivon-toeram-pikarohan' ny Nestlé, any Abidjan (Côte d'Ivoire) ary ireo sekoly ambony samihafa. (Fikarohana – Nampahafantarina ny karazam-bary vaovao ho an’ny sakafo mahasalama)
fahazakana (nitranga in-1) : Avy amin'ny taranaka iray mankamin'ny taranaka iray hafa, izany no kolontsaina nentim-paharazantsika: didy jadona, didiko-fe lehibe , ary ny tsy fahazakana fanoherana. (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
narenina (nitranga in-1) : omaly no naseho ireo karazam-bary nanaovana fikarohana
Tontosa omaly, tetsy amin'ny Hotel Colbert Antani- narenina, ny atrikasa tao anatin'ilay tetikasa fitaratra «voly vary, ho an'ny sakafo ara-pahasalamana». (Fikarohana – Nampahafantarina ny karazam-bary vaovao ho an’ny sakafo mahasalama)
delicious (nitranga in-2) : Mpanoratra Tea Leaf Nation · Nandika Jentilisa
generation (nitranga in-1) : One generation after another, this is our traditional culture: dictatorship, authoritarianism, and intolerance of opposition. (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
nahavita (nitranga in-1) : ireo mpanazatra vao nahavita fiofanana amin'ny taranja Triathlon
Barack (nitranga in-1) : Tamin'ny herinandro teo, nisy kabarin'ny filohan'i Etazonia Barack Obama momba ny lanjan'ny mahaolom-pirenena mandray andraikitra nanakoako tany amin'ny tambajotra sosialy shinoa. (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
society (nitranga in-1) : Nanoratra toy izao ny mpisera Weibo “Bandy goavana mandeha sahala amin'ny Dragona sy ny Tigra” (@大背头龙行虎步) [efa voafafa ny hafatra amin'ny teny shinoa niaviany]:
nitondra (nitranga in-1) : sahalan'ny efa mahay tsianjery ny tao an-tranon' ilay Ben'ny tanàna voatafika tety amin'ny faritra Ambohibao mihitsy ireo jiolahy, raha ny filazan' ireo zandary
Dimy lahy, nitondra basy poleta roa sy sabatra, no nanafika ny tranon'ny Ben'ny tanànan' Ambohibao, ny alin'ny talata hifoha omaly alarobia, tokony ho tamin'ny 11 ora alina. (Ambohibao Antehiroka – Adiny telo no nampihorohoroan’ny jiolahy ny Ben’ny tanàna mivady)
ligy (nitranga in-1) : Ligy vaovao
profesora (nitranga in-1) : Nana- marina izay ny profesora Roger Randrianasolo, lehiben'ny sampan-
tokontany (nitranga in-1) : Antso, noho izany, no nalefan'ny Lehiben'ny distrika tamin'ny mponina mba hampitsaharan'izy ireo ny fampanofana fiara na lakana na trano na tokontany amin'ny mpanao andramena. (Mananara Avaratra – Misy ambadika ny raharaha andramena)
fizaràna (nitranga in-1) : ireo mpanazatra vao nahavita fiofanana amin'ny taranja Triathlon
sosialista (nitranga in-1) : Raha miaina amin'ny firenena sosialista isika dia tsy afa-mieritreritra zavatra tahaka izany; fa arakaraky ny hieritreretanao azy ireny no hahatsapanao zavatra ratsiratsy kokoa [any anatinao any]. (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
China (nitranga in-1) : This is ‘soy-sauce vat' China, where everything ends up black [corrupt] regardless of how it started out. (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
Duathlon (nitranga in-1) : Manomana fifaninanana Duathlon sahady izy ireo ny 23 jona izao, ao amin'ny araben'ny Fahaleovantena ao Antsirabe, ka hitarafana ireo taninketsa, efa maro tokoa any an-toerana. (Fiofanana – Namokatra mpanazatra sivy ny Triathlon)
nanizingizina (nitranga in-1) : Vao tsy ela anefa izay no samy nanizingizina ny tokony tsy hikitikitihana intsony ny lisitra ofisialin'ireo kandida 41 hiatrika ny fifidianana filoham-pirenena navoakan'ny Fitsarana manokana misahana ny raharaham-pifidianana ny Filohan'ny tetezamita, Andry Rajoelina sy ny Filoha teo aloha, Marc Ravalomanana. (Vondrona Eoropeana – Mitsipaka ny filatsahan’i Lalao Ravalomanana, Ratsiraka, Rajoelina)
Rarihasina (nitranga in-1) : Efa nisy sahady ny «4 andro fampirantiana hosodoko» natomboka omaly ary haharitra hatramin'ny 18 mey, etsy amin'ny Tahala Rarihasina Analakely. (Sary sy hosodoko – Hisokatra amin’ny fialan-tsasatra lehibe ny «sekolin’ny sary» an-dRaparivo)
varatry (nitranga in-1) : Tahaka ny ody varatry mompera ihany io, ny aza voany. (Ny aza voany)
This (nitranga in-1) : This is ‘soy-sauce vat' China, where everything ends up black [corrupt] regardless of how it started out. (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
Morombe (nitranga in-1) : Mitarika vonjimaika ao anatin'ny fifanintsanana ny TTS Analamanga (vondrona C) sy ny JCM Morombe (vondrona A), samy nahazo isa 6. (Basket ball N1B lehilahy – Mitarika vonjimaika ny TTS Analamanga sy ny JCM Morombe)
Tezapsidis (nitranga in-1) : Tamin'iny herinandro lasa iny rahateo dia mbola nanamafy ny amin'ny tokony hitazonana ireo tetiandrom-pifidianana napetraky ny Cenit sy ny Firenena Mikambana ny Masoivohon'ny Vondrona Eoropeana, Leonidas Tezapsidis. (Vondrona Eoropeana – Mitsipaka ny filatsahan’i Lalao Ravalomanana, Ratsiraka, Rajoelina)
lamina (nitranga in-1) : Nomarihin'ity farany rahateo fa «ilaina ny fanajana ny sori-dalana ary tokony hiara-misalahy hitady izay fomba rehetra ahitana lamina politika hitondra ho any amin'ny fitoniana ka ahafahan'i Madagasikara miroso any amin'ny fifidianana ny mpanao politika malagasy». (Vondrona Eoropeana – Mitsipaka ny filatsahan’i Lalao Ravalomanana, Ratsiraka, Rajoelina)
sisintany (nitranga in-1) : 000 hiala amin'ny sisintany izay lasa Isiraely. (Fitantarana an-tSary Navoakan'ny Manomba-Maso An'i Palestina Farany Indrindra Ho Fahatsiarovana ny Nakba)
tenany (nitranga in-1) : Ny tenany no miandraikitra ny fibaikoana ny sekolin'ny zandarimaria ao Ambositra sy Moramanga, ny fanofanana ho fampiakarana laharamboninahitra, ary ny fanofanana ho amin'ny fibaikoana alika, eny Ivato. (Fanofanana manamboninahitra – Hangataka Akademia manokana ny zandarimariam-pirenena)
Art' (nitranga in-1) : «Dueln'ny samy ngeza» no fampisehoana voalohany hiarahan'i Fara John's sy Onja (Tinondia), eny Mahitsy amin'ny alahadin' ny Pantekôty izao, ao anatin'ny fikarakaran'ny Mi Art'i Pro. (« Samy ngeza » – Hifandona eny Mahitsy i Fara John’s sy Onja)
tara­tasy (nitranga in-1) : Voalaza fa tokony ho tafiditra ao anatin'io tara­tasy iray io ihany ny lisitr'ireo kandidà hofidiana amin'io fifidianana io. (Fifidianana filoha – Mety ho latsaky ny 1 m indray ny halavan’ny biletà tokana)
StumbleUpon (nitranga in-2) : Mpanoratra Tea Leaf Nation · Nandika Jentilisa
tsapiky (nitranga in-1) : Tafiditra ao anatin' izany ny Banaiky, Rodoringa ary ny tsapiky, samy gadona manetsiketsika vatana avokoa. (« Samy ngeza » – Hifandona eny Mahitsy i Fara John’s sy Onja)
tanàna (nitranga in-5) : sahalan'ny efa mahay tsianjery ny tao an-tranon' ilay Ben'ny tanàna voatafika tety amin'ny faritra Ambohibao mihitsy ireo jiolahy, raha ny filazan' ireo zandary
Dimy lahy, nitondra basy poleta roa sy sabatra, no nanafika ny tranon'ny Ben'ny tanànan' Ambohibao, ny alin'ny talata hifoha omaly alarobia, tokony ho tamin'ny 11 ora alina. (Fiofanana – Namokatra mpanazatra sivy ny Triathlon)
sehatry (nitranga in-1) : r eo amin'ny sehatry ny hosodoko. (Sary sy hosodoko – Hisokatra amin’ny fialan-tsasatra lehibe ny «sekolin’ny sary» an-dRaparivo)
Olympika (nitranga in-1) : “ Efa miomana ny handray anjara amin'ny Lalao Olympika, hatao any Colombie, amin'ny taona 2016 isika. (Fiofanana – Namokatra mpanazatra sivy ny Triathlon)
nosambory (nitranga in-1) : « Omaly alarobia no nosamborin'ny polisy teny amin'ny tranony, teny Lazaina, ilay lehilahy. (Lazaina Avaradrano – Mpiandry omby voatondro ho nanolana zaza efa-taona)
fandrobàna (nitranga in-2) : Mirarakompana ny vaky trano, asa fanendahana, fanafihana amin'ny endriny samihafa, fandrobàna tsy tambo isaina… tao anatin'ny taona vitsy izao. (Ny aza voany)
Cenit (nitranga in-4) : Tamin'iny herinandro lasa iny rahateo dia mbola nanamafy ny amin'ny tokony hitazonana ireo tetiandrom-pifidianana napetraky ny Cenit sy ny Firenena Mikambana ny Masoivohon'ny Vondrona Eoropeana, Leonidas Tezapsidis. (Fifidianana filoha – Mety ho latsaky ny 1 m indray ny halavan’ny biletà tokana)
Nirinasoa (nitranga in-1) : Marary mafy ka mila fanafody mitentina Ar 460 000 isan' andro ny zazavavi-kely iray vao 13 taona, Razafi- mahefa Mendrika Nirinasoa, avy eny Imerimanjaka, Ambohijanaka, izay tsaboina eny amin'ny hopitaly Ambohimiandra. (Hopitaly Ambohimiandra – Zaza marary mafy mila famonjena)
think (nitranga in-2) : “Lavenona Dragona” (@龙团一灰) naneho hevitra [efa voafafa ny hafatra niaviany],
ambadiky (nitranga in-2) : Nivadika tany ambadiky ny trano izy ireo avy eo ka novakiany ny varavaran­kely miditra ao an-dakozia. (Mananara Avaratra – Misy ambadika ny raharaha andramena)
fotoanan' (nitranga in-1) : Misondrotra ny vidim-piainana indrindra amin'ny fotoanan'ny fiotazana jirofo sy lavanila eo anelanelan'ny volana oktobra sy janoary. (Mananara Avaratra – Misy ambadika ny raharaha andramena)
hatolotr' (nitranga in-1) : Ny tontolon' ny r'n'b kosa no hatolotr' i Shyn. (Pantekôty Toamasina – Hiray sehatra i Nantenaina sy Shyn)
fantatry (nitranga in-1) : «Na ny toerana misy ny tahiry, any amin'ny dimy kilaometatra miala eto amin'ny tanànan'i Mananara aza dia fantatry ny rehetra», hoy ihany ity filohan'ny fikambanana Maso (Mananara Solidaire) ity, nanohy ny teniny. (Mananara Avaratra – Misy ambadika ny raharaha andramena)
voa­lazan' (nitranga in-1) : Tsy mbola manam-bady aman-janaka izy io ary mpiandry omby no asany », hoy ny voa­lazan'ny polisy. (Lazaina Avaradrano – Mpiandry omby voatondro ho nanolana zaza efa-taona)
Ambositra (nitranga in-1) : Ny tenany no miandraikitra ny fibaikoana ny sekolin'ny zandarimaria ao Ambositra sy Moramanga, ny fanofanana ho fampiakarana laharamboninahitra, ary ny fanofanana ho amin'ny fibaikoana alika, eny Ivato. (Fanofanana manamboninahitra – Hangataka Akademia manokana ny zandarimariam-pirenena)
faramparan' (nitranga in-1) : Lehilahy roa no voasambotry ny polisy misahana ny heloka bevava, tany Mandiavato, any amin'ny faritra Itasy sy tany Bongolava ny faramparan'ny volana avrily teo. (Famonoana sinoa vavy – Tafakatra 11 ireo voasambotra, vehivavy iray karohina fatratra)
fahampian' (nitranga in-1) : Nivoitra nandritra ity atrikasa ity mantsy ny tsy fahampian'ny vy sy ny «zinc» eo amin'ny sakafon'ny Malagasy amin'ny anka- pobeny, indrindra ho an' ireo reny sy ny zaza. (Fikarohana – Nampahafantarina ny karazam-bary vaovao ho an’ny sakafo mahasalama)
another (nitranga in-2) : One generation after another, this is our traditional culture: dictatorship, authoritarianism, and intolerance of opposition. (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
fombafomba (nitranga in-1) : Atao avy hatrany ny fisamborana dia tanterahina ny fombafomba rehetra voafaritry ny lalàna ahafahana manohy ny fanenjehana. (Mananara Avaratra – Misy ambadika ny raharaha andramena)
Tratran' (nitranga in-1) : Tratran'ny aretina sarotra sitranina amin'ny havokavoka izy. (Hopitaly Ambohimiandra – Zaza marary mafy mila famonjena)
Reggae (nitranga in-1) : Hisy ny acapella, Reggae ary indrindra ny fitrandrahana ny basesa, hoentin'i Nantenaina. (Pantekôty Toamasina – Hiray sehatra i Nantenaina sy Shyn)
hitazomana (nitranga in-1) : Etsy an-danin'izay anefa dia misy soson-kevitra ny hitazomana ny endrikendrik'ilay biletà tokana, araka izay efa nanomboka nampahafantarina, andro maromaro izay. (Fifidianana filoha – Mety ho latsaky ny 1 m indray ny halavan’ny biletà tokana)
hametrahana (nitranga in-1) : Teo anivon'ny Sehatra fifampidinihana Crdm no nitsiry ny hevitra hametrahana Dina ho amin'izany. (Mananara Avaratra – Misy ambadika ny raharaha andramena)
hampiasaina (nitranga in-1) : mety tsy hanana halava iray metatra mahery toy ny teo aloha intsony fa ahena araka izay tratra ny biletà tokana hampiasaina amin'ny fifidianana filoham-pirenena. (Fifidianana filoha – Mety ho latsaky ny 1 m indray ny halavan’ny biletà tokana)
fivaro­tana (nitranga in-1) : Tranoheva maro no kila forehitra niaraka tamin' ny talantalana fivaro­tana sy latabatra ary ny seza. (Tapatapany)
Zhiqiang (nitranga in-1) : Ary hoy [zh]i Ren Zhiqiang (@任志强), izay mpanankaremben'ny fanana-trano manana mpanaraka mihoatra ny 14 tapitrisa ao amin'ny Weibo,
总统的讲话从来不是必须学习的圣旨。而是一种常识。 Ny kabarin'ny filoha tsy mandidy mihitsy hoe ilaina ianarana daholo izany, fa fahaiza-misaina fotsiny. (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
Hirosoana (nitranga in-1) : Hirosoana ihany koa, araka ny voalaza ny atrikasam-piofanana ho an'ny zandary efa am-perinasa mba ho fanatsarana ny kalitaon'ny asan'izy ireo. (Fanofanana manamboninahitra – Hangataka Akademia manokana ny zandarimariam-pirenena)
hoavy (nitranga in-2) : Nanontany tena ny mpisera “Hula Baopei” (@呼啦啦啦宝宝_佩) : 当国内大学生一毕业便面临高房价、物价而不得不屈服于现实失去梦想时，美国青年却可以以祖国未来为己任，被赋予强大的公民意识，坚定不移的实现自己的梦想、承担国家发展之重任，我在想中国的未来在哪里？下一代的未来在哪里？ Raha milefitra manoloana ny zava-misy ny mpianatry ny kolejy shinoa ka tsy mahatadidy intsony ny nofinofiny manoloana ny fahalafosana sy ny tsy fahatakarana ny zo hanam-ponenana aorian'ny nandiavana ny kolejy, Afa-mametraka ny hoavin'ny tanindrazany ho iraka ataony manokana kosa ny tanora Amerikana; efa tsara volavola tao amin'ny fahatsa.... (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
mampiahiahy (nitranga in-1) : mampiahiahy ny zanak'i Mananara Avaratra ny fihetsiky ny manampahefana sasany, izay toa tsy taitra mahita ny fandripahana sy fanondranana ny andramena. (Mananara Avaratra – Misy ambadika ny raharaha andramena)
hisorohana (nitranga in-1) : Mba hisorohana ny mety ho fahabangana, araka ny lalàna, aterak'izay rehetra izay no voalaza fa antony handinihana amin'ny antsipiriany io andininy io. (Fiaraha-mitantana ny tetezamita – Hampitovy tadin-dokanga Rajoelina, Beriziky, Rakotoarivelo ary Rasolosoa Dolin)
nahazoana (nitranga in-1) : «Teo anivon' ny toeram-pikarohana Africa Rice sy ny FOFIFA no nahazoana ilay karazam- bary Nerica, nofidiana manokana noho ny singa ao anatiny sy ny hery entiny», hoy kosa Philippe Courbet, manam-pahaizana momba ny fambolena avy amin'ny ivon-toeram-pikarohan' ny Nestlé, any Abidjan. (Fikarohana – Nampahafantarina ny karazam-bary vaovao ho an’ny sakafo mahasalama)
Joey (nitranga in-1) : org/disappearing-palestine
zanany (nitranga in-1) : Ireo no havadika ho fomba fiasa sy ampianarina ny ankizy amin'io sekoly io», hoy Raparivo Tiana, zanany ary tompo-marika amin' ny fametrahana iry tetik'asa «sekolin'ny sary» iry. (Sary sy hosodoko – Hisokatra amin’ny fialan-tsasatra lehibe ny «sekolin’ny sary» an-dRaparivo)
tsenan' (nitranga in-1) : Raha mananontanona ny fito tapitrisa ny mpianatry ny kolejy nahazo diplaoma miditra amin'ny tsenan'ny asa, dia sivy tapitrisa ihany ny asa vaovao voaforoona, ary dia tsy maintsy mifaninana amin'ireo mpianatra avy any ivelany, sy ireo nahazo ny diplaoman'ny sekoly ambony sy ny sekolin'ny fifampiraharahana ara-barotra ry zareo amin'izany. (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
1948 (nitranga in-1) : Tamin'ny 1948, mihoatra ny 50%n'ny Palestiniana manontolo no voadio ara-poko. (Fitantarana an-tSary Navoakan'ny Manomba-Maso An'i Palestina Farany Indrindra Ho Fahatsiarovana ny Nakba)
hofidiana (nitranga in-2) : Nahemotra amin'ny 15 jona izao ny fe-potoana ahafahan'ireo kandidà maniry ny hirotsaka hofidiana amin'ny fifidianana solombavambahoaka manatitra ireo antontan-taratasy ilaina amin'izany. (Fifidianana filoha – Mety ho latsaky ny 1 m indray ny halavan’ny biletà tokana)
isehoana (nitranga in-1) : Matetika no isehoana halatr'omby toy izao ny ao amin'ity tanàna ity. (Tapatapany)
Patrick (nitranga in-1) : Ligy vaovao
Shinoa (nitranga in-1) : Nanoratra ny mpisera Weibo iray hafa, “Efa natavy” (@曾经的胖胖胖胖):
为什么中国人缺少公民意识，因为他们不觉得这个政府跟他们有关系，而且事实上这个政府也的确不是来自选票…… Nahoana ny Shinoa no tsy manana fahatsiarovan-tena ho olom-pirenena. (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
fifanintsanana (nitranga in-1) : Mitarika vonjimaika ao anatin'ny fifanintsanana ny TTS Analamanga (vondrona C) sy ny JCM Morombe (vondrona A), samy nahazo isa 6. (Basket ball N1B lehilahy – Mitarika vonjimaika ny TTS Analamanga sy ny JCM Morombe)
Agadir (nitranga in-1) : Handefa an'i Zouzou hiady ny amboara afrikanina any Agadir, Maraoka kosa ny 28 mey ho avy izao. (Fiofanana – Namokatra mpanazatra sivy ny Triathlon)
Tranoheva (nitranga in-1) : Tranoheva maro no kila forehitra niaraka tamin' ny talantalana fivaro­tana sy latabatra ary ny seza. (Tapatapany)
taonina (nitranga in-3) : Sambo mahazaka entana any amin'ny 1 500 taonina na 2 000 taonina izy io», hoy Rabemazava Soa Jean, nijoro tsy nihambahamba. (Mananara Avaratra – Misy ambadika ny raharaha andramena)
mpianatry (nitranga in-2) : Nanontany tena ny mpisera “Hula Baopei” (@呼啦啦啦宝宝_佩) : 当国内大学生一毕业便面临高房价、物价而不得不屈服于现实失去梦想时，美国青年却可以以祖国未来为己任，被赋予强大的公民意识，坚定不移的实现自己的梦想、承担国家发展之重任，我在想中国的未来在哪里？下一代的未来在哪里？ Raha milefitra manoloana ny zava-misy ny mpianatry ny kolejy shinoa ka tsy mahatadidy intsony ny nofinofiny manoloana ny fahalafosana sy ny tsy fahatakarana ny zo hanam-ponenana aorian'ny nandiavana ny kolejy, Afa-mametraka ny hoavin'ny tanindrazany ho iraka ataony manokana kosa ny tanora Amerikana; efa tsara volavola tao amin'ny fahatsa.... (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
hanatontosa (nitranga in-1) : Miainga amin'ny fanantenana hanatontosa ny maha-olompirenena avokoa ny tanora, saingy midona amin'ny rindrina hatrany izy ireo ao amin'ny fiaraha-monina, lasa miodina mankany amin'ny fahalalàna olona avy eo ry zareo. (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
ifotony (nitranga in-2) : Efa tonga nijery ifotony ny fahavoazana, ny lehiben'ny distrika ao Antanifotsy. (Mananara Avaratra – Misy ambadika ny raharaha andramena)
Zouzou (nitranga in-2) : Handefa an'i Zouzou hiady ny amboara afrikanina any Agadir, Maraoka kosa ny 28 mey ho avy izao. (Fiofanana – Namokatra mpanazatra sivy ny Triathlon)
youth (nitranga in-1) : Nanoratra toy izao ny mpisera Weibo “Bandy goavana mandeha sahala amin'ny Dragona sy ny Tigra” (@大背头龙行虎步) [efa voafafa ny hafatra amin'ny teny shinoa niaviany]:
Nivoitra (nitranga in-1) : Nivoitra nandritra ity atrikasa ity mantsy ny tsy fahampian'ny vy sy ny «zinc» eo amin'ny sakafon'ny Malagasy amin'ny anka- pobeny, indrindra ho an' ireo reny sy ny zaza. (Fikarohana – Nampahafantarina ny karazam-bary vaovao ho an’ny sakafo mahasalama)
Vakinankaratra (nitranga in-1) : Manana isa 4 avy kosa ny SBC Vakinankaratra sy JSM Bongolava ary USF Matsiatra Ambony. (Basket ball N1B lehilahy – Mitarika vonjimaika ny TTS Analamanga sy ny JCM Morombe)
Analakely (nitranga in-2) : Mijanona amin'ny vidiny teo aloha ihany ny vidiny na dia fotoana mampandeha ny tsena aza izao », hoy Endrininosy Sabine, mpivarotra, etsy Analakely. (Sary sy hosodoko – Hisokatra amin’ny fialan-tsasatra lehibe ny «sekolin’ny sary» an-dRaparivo)
nakana (nitranga in-1) : « Tsy dia nandeha loatra ny tsena tamin'ny vanim-potoana teo aloha ka mbola tsy niova ny vidiny nakana azy teny amin'ny mpamongady. (Fiatrehana ririnina – Tsy nisy fiovana ny vidin’ ny bodofotsy eny an-tsena)
ampiarahina (nitranga in-1) : Ireo gadona avy any amin'ny faritra atsimo, ampiarahina amin'ny zava-maneno mavesatra kosa no mampalaza an'i Onja. (« Samy ngeza » – Hifandona eny Mahitsy i Fara John’s sy Onja)
Rasolosoa (nitranga in-1) : hifanakalo hevitra amin' ny Praiminisitra Omer Beri­ziky, ny filohan'ny Kaongresy, Mamy Rakoto­arivelo ary ny filohan'ny Filankevitra ambonin'ny tetezamita, ny jeneraly Dolin Rasolosoa mahakasika ny fiaraha-mitantana ny tetezamita aorian'ny fametraham-pialany, ny Filohan'ny tetezamita, Andry Rajoelina, anio hariva. (Fiaraha-mitantana ny tetezamita – Hampitovy tadin-dokanga Rajoelina, Beriziky, Rakotoarivelo ary Rasolosoa Dolin)
napetrak' (nitranga in-1) : Sambany ny fiarahan'izy roa lahy an-tsehatra ao Toamasina, araka ny fanamby napetrak'i Nantenaina ho an'ny vahoakan'i Toamasina. (Pantekôty Toamasina – Hiray sehatra i Nantenaina sy Shyn)
saosy (nitranga in-1) : Izany no “taharo (fanaovana) saosy saozaha shinoa”, izay mifarana ho mainty avokoa ny zavatra rehetra na inona na inona ny nanombohana azy. (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
foko­nolona (nitranga in-1) : Ireo foko­nolona no nanao fana­rahan-dia voalohany vao nahazo antso ny zandary ka nanampy azy ireo. (Tapatapany)
hieritreretanao (nitranga in-1) : Raha miaina amin'ny firenena sosialista isika dia tsy afa-mieritreritra zavatra tahaka izany; fa arakaraky ny hieritreretanao azy ireny no hahatsapanao zavatra ratsiratsy kokoa [any anatinao any]. (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
Instapaper (nitranga in-2) : Mpanoratra Tea Leaf Nation · Nandika Jentilisa
Ben' (nitranga in-3) : sahalan'ny efa mahay tsianjery ny tao an-tranon' ilay Ben'ny tanàna voatafika tety amin'ny faritra Ambohibao mihitsy ireo jiolahy, raha ny filazan' ireo zandary
Endrininosy (nitranga in-1) : Mijanona amin'ny vidiny teo aloha ihany ny vidiny na dia fotoana mampandeha ny tsena aza izao », hoy Endrininosy Sabine, mpivarotra, etsy Analakely. (Fiatrehana ririnina – Tsy nisy fiovana ny vidin’ ny bodofotsy eny an-tsena)
nahitako (nitranga in-1) : Vao voalohany no nahitako aretina toy izao tao anatin'ny 15 taona niasako”, hoy Dr Rakotonandrasana David Harimbola, mpitsabo ankizy manara-maso ny fahasalamany eny Ambohimiandra. (Hopitaly Ambohimiandra – Zaza marary mafy mila famonjena)
mitankemotra (nitranga in-1) : Tsy manao ilay dingana lehibe ny hafa dia mitankemotra ihany koa ny sasany. (Kajikajy)
John' (nitranga in-2) : «Dueln'ny samy ngeza» no fampisehoana voalohany hiarahan'i Fara John's sy Onja (Tinondia), eny Mahitsy amin'ny alahadin' ny Pantekôty izao, ao anatin'ny fikarakaran'ny Mi Art'i Pro. (« Samy ngeza » – Hifandona eny Mahitsy i Fara John’s sy Onja)
2016 (nitranga in-1) : “ Efa miomana ny handray anjara amin'ny Lalao Olympika, hatao any Colombie, amin'ny taona 2016 isika. (Fiofanana – Namokatra mpanazatra sivy ny Triathlon)
towards (nitranga in-1) : Nanoratra toy izao ny mpisera Weibo “Bandy goavana mandeha sahala amin'ny Dragona sy ny Tigra” (@大背头龙行虎步) [efa voafafa ny hafatra amin'ny teny shinoa niaviany]:
Mahatombo (nitranga in-3) : Namory ny OMC (Organe mixte de conception) izay ahitana ny Kaomandàn'ny borigadin'ny zandarimaria sy ny Kaomiseran'ny polisy ary nitarina tamin'ny tompon'andraikitry ny ala, ny Lehiben'ny distrika Raharison Mahatombo, tamin'ny volana avrily. (Mananara Avaratra – Misy ambadika ny raharaha andramena)
notsaboina (nitranga in-1) : “18 andro no efa notsaboina ety amin'ny hopitaly Ambohimiandra izy ka nambaran'ny dokotera fa tokony hotohizana 30 andro ny fanafody. (Hopitaly Ambohimiandra – Zaza marary mafy mila famonjena)
Rodoringa (nitranga in-1) : Tafiditra ao anatin' izany ny Banaiky, Rodoringa ary ny tsapiky, samy gadona manetsiketsika vatana avokoa. (« Samy ngeza » – Hifandona eny Mahitsy i Fara John’s sy Onja)
napetraky (nitranga in-2) : Etsy an-danin'izay dia nanamafy ny hiadiana amin'ny kolikoly, izay efa drafitra napetraky ny Kaomandin'ny zandarimariam-pirenena ity Kaomandin'ny sekoly sy ny fanofanana eo anivon'ny zandarimariam-pirenena ity. (Vondrona Eoropeana – Mitsipaka ny filatsahan’i Lalao Ravalomanana, Ratsiraka, Rajoelina)
hahamora (nitranga in-1) : ity lahatsoratra ity dia navoakan'i Rachel Wang originally tao amin'ny Tea Leaf Nation (Firenena Ravin-dite) tamin'ny 13 Mey 2013 ary navoaka indray ho anisan'ny fifanarahana fifampizarana votoaty [Endrika natao nanara-bolontany hahamora ny fandikan-dahatsoratra]. (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
kapoakan' (nitranga in-1) : 450 Ariary no ividianana ny kapoakan'ny vary. (Mananara Avaratra – Misy ambadika ny raharaha andramena)
isak' (nitranga in-1) : Tsy ny sakana ataon'ny polisy na zandary eny amin'ny arabe isak'alina akory no hampandry fahalemana ny tokantrano any anaty elankelan-trano maro any, raha ho an'ny eto an-drenivohitra. (Ny aza voany)
hoenty (nitranga in-1) : Hisy ny acapella, Reggae ary indrindra ny fitrandrahana ny basesa, hoentin'i Nantenaina. (Pantekôty Toamasina – Hiray sehatra i Nantenaina sy Shyn)
hajanona (nitranga in-1) : Araka ny vaovao mbola tsy ofi­sialy avy amin'ireo manam-pahaizana manokana momba ny raharaham-pifidianana, omaly, dia «mety hajanona ho taratasy tokana amin'ny endrika A3 ihany io biletà io». (Fifidianana filoha – Mety ho latsaky ny 1 m indray ny halavan’ny biletà tokana)
handinihana (nitranga in-1) : Mba hisorohana ny mety ho fahabangana, araka ny lalàna, aterak'izay rehetra izay no voalaza fa antony handinihana amin'ny antsipiriany io andininy io. (Fiaraha-mitantana ny tetezamita – Hampitovy tadin-dokanga Rajoelina, Beriziky, Rakotoarivelo ary Rasolosoa Dolin)
fifampidinihana (nitranga in-1) : Teo anivon'ny Sehatra fifampidinihana Crdm no nitsiry ny hevitra hametrahana Dina ho amin'izany. (Mananara Avaratra – Misy ambadika ny raharaha andramena)
Ambohibao (nitranga in-5) : sahalan'ny efa mahay tsianjery ny tao an-tranon' ilay Ben'ny tanàna voatafika tety amin'ny faritra Ambohibao mihitsy ireo jiolahy, raha ny filazan' ireo zandary
traditional (nitranga in-1) : One generation after another, this is our traditional culture: dictatorship, authoritarianism, and intolerance of opposition. (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
andramenan' (nitranga in-1) : Ny ankamaroan'ireo andramenan'i Mananara dia tsy maintsy mandalo eo amin'ny vinany antsoina hoe Agnalila, vao akarina ao anaty sambo lehibe hitondra azy any ivelany. (Mananara Avaratra – Misy ambadika ny raharaha andramena)
Antsaha­maina (nitranga in-1) : Nirehitra ny tsena ao amin'ny kaominina Antsaha­maina, any Antanifotsy ny alatsinainy alina teo. (Tapatapany)
Agnalila (nitranga in-1) : Ny ankamaroan'ireo andramenan'i Mananara dia tsy maintsy mandalo eo amin'ny vinany antsoina hoe Agnalila, vao akarina ao anaty sambo lehibe hitondra azy any ivelany. (Mananara Avaratra – Misy ambadika ny raharaha andramena)
laharamboninahitra (nitranga in-1) : Ny tenany no miandraikitra ny fibaikoana ny sekolin'ny zandarimaria ao Ambositra sy Moramanga, ny fanofanana ho fampiakarana laharamboninahitra, ary ny fanofanana ho amin'ny fibaikoana alika, eny Ivato. (Fanofanana manamboninahitra – Hangataka Akademia manokana ny zandarimariam-pirenena)
hanemorana (nitranga in-1) : Tsy misy mihevitra ny hiala mora foana izany fa dia mitady izay fomba rehetra hanemorana ilay fotoana fametraham-pialana foana aloha. (Kajikajy)
atrehy (nitranga in-1) : Tafiditra ao anatin'ny resaka ihany koa ny tolona maro, ny fahasarotana maro ary ny fahakiviana atrehin'ny tanora shinoa ankehitriny. (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
Yunkeng (nitranga in-1) : Nisy ny fampitahana ny vokatra avy amin'ny karazam-bary vaovao tamin' ny vary, efa mahazatra ireo tantsaha, ka anisan'ireo natolotra tamin'izany ny karazam-bary Nerica 1,2,4,6, ary 15, ny X-Jigna ary ny Yunkeng. (Fikarohana – Nampahafantarina ny karazam-bary vaovao ho an’ny sakafo mahasalama)
Colbert (nitranga in-1) : omaly no naseho ireo karazam-bary nanaovana fikarohana
Roland (nitranga in-1) : 56 taona nanaovana sary hosodoko, hankalazaina amin'ny taona ho avy ny faha-80 taona nahaterahan-dRaparivo Roland Ramaheninarivo, na Raparivo R. (Sary sy hosodoko – Hisokatra amin’ny fialan-tsasatra lehibe ny «sekolin’ny sary» an-dRaparivo)
Omer (nitranga in-1) : hifanakalo hevitra amin' ny Praiminisitra Omer Beri­ziky, ny filohan'ny Kaongresy, Mamy Rakoto­arivelo ary ny filohan'ny Filankevitra ambonin'ny tetezamita, ny jeneraly Dolin Rasolosoa mahakasika ny fiaraha-mitantana ny tetezamita aorian'ny fametraham-pialany, ny Filohan'ny tetezamita, Andry Rajoelina, anio hariva. (Fiaraha-mitantana ny tetezamita – Hampitovy tadin-dokanga Rajoelina, Beriziky, Rakotoarivelo ary Rasolosoa Dolin)
Randriambololona (nitranga in-1) : Raisinay am-pitiavana izay foin'ny tsara sitra-po sao mbola azo avotana ihany ny ainy, izay voalohan-janakay amin'ny zaza roa”, hoy Randriambololona Marie Odette, reniny. (Hopitaly Ambohimiandra – Zaza marary mafy mila famonjena)
faritry (nitranga in-1) : Ireo rehetra ireo dia tafiditra ao amin'ny faritry ny ala arovana Verezantsoro. (Mananara Avaratra – Misy ambadika ny raharaha andramena)
ahafahana (nitranga in-2) : Atao avy hatrany ny fisamborana dia tanterahina ny fombafomba rehetra voafaritry ny lalàna ahafahana manohy ny fanenjehana. (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
6000 (nitranga in-1) : 000 sy fanehoan-kevitra manakaiky ny 6000 tao anatin'ny roa andro ny hafatra nalefan'i ”Milaza tena ho eto New York”, sy ny dikantenin'ny kabary. (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
voaforoona (nitranga in-1) : Raha mananontanona ny fito tapitrisa ny mpianatry ny kolejy nahazo diplaoma miditra amin'ny tsenan'ny asa, dia sivy tapitrisa ihany ny asa vaovao voaforoona, ary dia tsy maintsy mifaninana amin'ireo mpianatra avy any ivelany, sy ireo nahazo ny diplaoman'ny sekoly ambony sy ny sekolin'ny fifampiraharahana ara-barotra ry zareo amin'izany. (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
nijoro (nitranga in-1) : Sambo mahazaka entana any amin'ny 1 500 taonina na 2 000 taonina izy io», hoy Rabemazava Soa Jean, nijoro tsy nihambahamba. (Mananara Avaratra – Misy ambadika ny raharaha andramena)
GLOBE (nitranga in-1) : s C (62)
Vondrona A – GLOBE TROTTERS (83) # J. (Basket ball N1B lehilahy – Mitarika vonjimaika ny TTS Analamanga sy ny JCM Morombe)
Kaomandàn' (nitranga in-1) : Namory ny OMC (Organe mixte de conception) izay ahitana ny Kaomandàn'ny borigadin'ny zandarimaria sy ny Kaomiseran'ny polisy ary nitarina tamin'ny tompon'andraikitry ny ala, ny Lehiben'ny distrika Raharison Mahatombo, tamin'ny volana avrily. (Mananara Avaratra – Misy ambadika ny raharaha andramena)
black (nitranga in-1) : This is ‘soy-sauce vat' China, where everything ends up black [corrupt] regardless of how it started out. (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
kevitra (nitranga in-1) : Nana- marina izay ny profesora Roger Randrianasolo, lehiben'ny sampan-
mampalaza (nitranga in-1) : Ireo gadona avy any amin'ny faritra atsimo, ampiarahina amin'ny zava-maneno mavesatra kosa no mampalaza an'i Onja. (« Samy ngeza » – Hifandona eny Mahitsy i Fara John’s sy Onja)
over (nitranga in-2) : Nanoratra toy izao ny mpisera Weibo “Bandy goavana mandeha sahala amin'ny Dragona sy ny Tigra” (@大背头龙行虎步) [efa voafafa ny hafatra amin'ny teny shinoa niaviany]:
Banaiky (nitranga in-1) : Tafiditra ao anatin' izany ny Banaiky, Rodoringa ary ny tsapiky, samy gadona manetsiketsika vatana avokoa. (« Samy ngeza » – Hifandona eny Mahitsy i Fara John’s sy Onja)
traikefa (nitranga in-1) : Ity tanàna ity, izay manana an'i Zouzou Andriafenomanananiaina sy Roger Andrianambinina, samy avy ao amin'ny ECA sy kintan'ny Triathlon eto Madagasikara ary manana traikefa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. (Fiofanana – Namokatra mpanazatra sivy ny Triathlon)
diniky (nitranga in-1) : Araka ny fanambarana avy amin'ny Fiadidiana ny tetezamita, omaly, dia hiompana amin'ny fampiharàna ny andininy faha-14 ao
democracy (nitranga in-1) : The burdens of tradition are way too heavy; democracy might be another century away. (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
Palestiniana (nitranga in-4) : ho fahatsiarovana ny Andron'ny Nakba, namoaka ny fitantarana an-tsary nohavaoziny farany indrindra ny ekipan'ny ‘Visualizing Palestine' (manomba-maso an'i Palestina) mitondra ny lohateny hoe “Famindra-monina mbola mitohy” izay “mametraka an'isa ny habe sy velaran'ny famindra-monina sy fahaverezan'ny tany Palestiniana. (Fitantarana an-tSary Navoakan'ny Manomba-Maso An'i Palestina Farany Indrindra Ho Fahatsiarovana ny Nakba)
cannot (nitranga in-1) : “Lavenona Dragona” (@龙团一灰) naneho hevitra [efa voafafa ny hafatra niaviany],
zanak' (nitranga in-2) : mampiahiahy ny zanak'i Mananara Avaratra ny fihetsiky ny manampahefana sasany, izay toa tsy taitra mahita ny fandripahana sy fanondranana ny andramena. (Mananara Avaratra – Misy ambadika ny raharaha andramena)
federasionan' (nitranga in-1) : Andrasana ihany koa ny lalaon'ny Cjsoi, hatao atsy La Réunion”, hoy Raoelina Andriambololona Tiana, filohan'ny federasionan'ny triathlon. (Fiofanana – Namokatra mpanazatra sivy ny Triathlon)
kandida (nitranga in-1) : Vao tsy ela anefa izay no samy nanizingizina ny tokony tsy hikitikitihana intsony ny lisitra ofisialin'ireo kandida 41 hiatrika ny fifidianana filoham-pirenena navoakan'ny Fitsarana manokana misahana ny raharaham-pifidianana ny Filohan'ny tetezamita, Andry Rajoelina sy ny Filoha teo aloha, Marc Ravalomanana. (Vondrona Eoropeana – Mitsipaka ny filatsahan’i Lalao Ravalomanana, Ratsiraka, Rajoelina)
ahafahan' (nitranga in-2) : Nomarihin'ity farany rahateo fa «ilaina ny fanajana ny sori-dalana ary tokony hiara-misalahy hitady izay fomba rehetra ahitana lamina politika hitondra ho any amin'ny fitoniana ka ahafahan'i Madagasikara miroso any amin'ny fifidianana ny mpanao politika malagasy». (Sombiny)
diplaoman' (nitranga in-3) : Angamba ho an'ireo vao nahazo ny diplaoman'ny kolejy farany indrindra teo, ny tsindry mitambesatra an-dry zareo dia tsy hoe ahoana ny fomba hanovana ny firenena, fa ny hoe ahoana no ahafahana miavo-tena ao anatin'izao toe-karena mampalahelo ity. (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
manetsiketsika (nitranga in-1) : Tafiditra ao anatin' izany ny Banaiky, Rodoringa ary ny tsapiky, samy gadona manetsiketsika vatana avokoa. (« Samy ngeza » – Hifandona eny Mahitsy i Fara John’s sy Onja)
ratsiratsy (nitranga in-1) : Raha miaina amin'ny firenena sosialista isika dia tsy afa-mieritreritra zavatra tahaka izany; fa arakaraky ny hieritreretanao azy ireny no hahatsapanao zavatra ratsiratsy kokoa [any anatinao any]. (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
Mpisera (nitranga in-1) : Mpisera Sina Weibo @假装在纽约 manana ny ambaindainy, na “milaza tena ho any New York,” izay tia manaitaitra amin'ny ankapobeny izay miresaka matetika momba an' Etazonia ary manana mpanaraka mihoatra ny 470. (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
fampiharàna (nitranga in-1) : Araka ny fanambarana avy amin'ny Fiadidiana ny tetezamita, omaly, dia hiompana amin'ny fampiharàna ny andininy faha-14 ao
Fahaleovantena (nitranga in-1) : Manomana fifaninanana Duathlon sahady izy ireo ny 23 jona izao, ao amin'ny araben'ny Fahaleovantena ao Antsirabe, ka hitarafana ireo taninketsa, efa maro tokoa any an-toerana. (Fiofanana – Namokatra mpanazatra sivy ny Triathlon)
Jentilisa (nitranga in-2) : Mpanoratra Tea Leaf Nation · Nandika Jentilisa
where (nitranga in-1) : This is ‘soy-sauce vat' China, where everything ends up black [corrupt] regardless of how it started out. (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
Takianay (nitranga in-1) : Takianay ny hanomezana tamberim-bidy anay avy amin'ireo andramena nogiazana», hoy Rabemazava Soa Jean. (Mananara Avaratra – Misy ambadika ny raharaha andramena)
namindrana (nitranga in-1) : ”
ireto (nitranga in-1) : Hifampidera ny talentany avy, amin' ny alalan'ny mozika mafana ao amin'ny kianjaben'i Mahitsy izy mirahavavy ireto. (« Samy ngeza » – Hifandona eny Mahitsy i Fara John’s sy Onja)
Triathlon (nitranga in-3) : ireo mpanazatra vao nahavita fiofanana amin'ny taranja Triathlon
niova (nitranga in-2) : Azo lazaina fa takatry ny rehetra sady tsy niova tamin'ny vidiny tamin'ny andro mafana teo aloha itony lamba firakotra itony. (Fiatrehana ririnina – Tsy nisy fiovana ny vidin’ ny bodofotsy eny an-tsena)
hapetraka (nitranga in-1) : «Tsy hoe hisintaka tanteraka amin'ny Tafika tsy akory fa hapetraka hatrany ny firahalahiana eo amin'ny samy miaramila», hoy izy raha nanohy ny fanazavany manodidina ilay hevitra fananganana Akademia manokana ho an'ny zandarimaria. (Fanofanana manamboninahitra – Hangataka Akademia manokana ny zandarimariam-pirenena)
nadika (nitranga in-2) : Mpanoratra Tea Leaf Nation · Nandika Jentilisa
reddit (nitranga in-2) : Mpanoratra Tea Leaf Nation · Nandika Jentilisa
Afrika (nitranga in-2) : Omaly rahateo no tonga teto Mada­gasikara handinika miaraka amin'ny Cenit momba izany ireo manam-pahaizana manokana avy amin'ny Ceni ao Afrika Atsimo ka ny zoma no hampahafantarana ireo kandidà ny tena ho endrik'ity biletà tokana ity. (Fikarohana – Nampahafantarina ny karazam-bary vaovao ho an’ny sakafo mahasalama)
Fidèle (nitranga in-1) : ny kolonely Rasolofo Lumène
taonjato (nitranga in-1) : Mavesatra loatra ny vesatry ny nentim-paharazana; mety hoe efa taonjato hafa izany demokrasia izany. (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
fahalalàna (nitranga in-1) : Miainga amin'ny fanantenana hanatontosa ny maha-olompirenena avokoa ny tanora, saingy midona amin'ny rindrina hatrany izy ireo ao amin'ny fiaraha-monina, lasa miodina mankany amin'ny fahalalàna olona avy eo ry zareo. (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
Andrianambinina (nitranga in-1) : Ity tanàna ity, izay manana an'i Zouzou Andriafenomanananiaina sy Roger Andrianambinina, samy avy ao amin'ny ECA sy kintan'ny Triathlon eto Madagasikara ary manana traikefa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. (Fiofanana – Namokatra mpanazatra sivy ny Triathlon)
away (nitranga in-1) : The burdens of tradition are way too heavy; democracy might be another century away. (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
Bongolava (nitranga in-3) : Lehilahy roa no voasambotry ny polisy misahana ny heloka bevava, tany Mandiavato, any amin'ny faritra Itasy sy tany Bongolava ny faramparan'ny volana avrily teo. (Basket ball N1B lehilahy – Mitarika vonjimaika ny TTS Analamanga sy ny JCM Morombe)
voasambotry (nitranga in-1) : Lehilahy roa no voasambotry ny polisy misahana ny heloka bevava, tany Mandiavato, any amin'ny faritra Itasy sy tany Bongolava ny faramparan'ny volana avrily teo. (Famonoana sinoa vavy – Tafakatra 11 ireo voasambotra, vehivavy iray karohina fatratra)
fahavononana (nitranga in-1) : Basy atifi-kavana
Ny solontenam-panjakana any an-toerana dia naneho fahavononana handray fepetra manoloana ny gaboraraka. (Mananara Avaratra – Misy ambadika ny raharaha andramena)
Manambolosy (nitranga in-1) : Misy ihany anefa ny avy any amin'ny kaominina Manambolosy. (Mananara Avaratra – Misy ambadika ny raharaha andramena)
ends (nitranga in-1) : This is ‘soy-sauce vat' China, where everything ends up black [corrupt] regardless of how it started out. (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
nanohana (nitranga in-1) : nanohana ny fanambaran'ny «Troïka», rafitra mpanatanteraky ny Vondrona Sadc, izay nilaza ny tokony hisintahan'ny Filohan'ny tetezamita, Andry Rajoelina sy ny Filoha teo aloha, ny amiraly Didier Ratsiraka ary i Lalao Ravalomanana, amin'ny fifidianana Filoham-pirnena ihany koa ny Vondrona Eoropeana. (Vondrona Eoropeana – Mitsipaka ny filatsahan’i Lalao Ravalomanana, Ratsiraka, Rajoelina)
namoaka (nitranga in-2) : Toa very fanahy mbola velona ny any Mananara Avaratra mahita maso ny fitrandrahana sy fanondranana tsy amin-tahotra ny andramena, na dia efa namoaka didy fandraràna izany aza ny fitondrana foibe. (Fitantarana an-tSary Navoakan'ny Manomba-Maso An'i Palestina Farany Indrindra Ho Fahatsiarovana ny Nakba)
efitranon' (nitranga in-1) : Rehefa tafiditra tao amin'ny efitranon'izy mivady ireo jiolahy dia namatotra ny vadin'ilay Ben'ny tanàna. (Ambohibao Antehiroka – Adiny telo no nampihorohoroan’ny jiolahy ny Ben’ny tanàna mivady)
nikotrika (nitranga in-1) : Fantatra ihany koa fa mbola misy vehivavy iray, atidoha nikotrika ity famonoana sinoa ity karohin'ny polisy fatratra amin'izao fotoana izao. (Famonoana sinoa vavy – Tafakatra 11 ireo voasambotra, vehivavy iray karohina fatratra)
Courbet (nitranga in-1) : «Teo anivon' ny toeram-pikarohana Africa Rice sy ny FOFIFA no nahazoana ilay karazam- bary Nerica, nofidiana manokana noho ny singa ao anatiny sy ny hery entiny», hoy kosa Philippe Courbet, manam-pahaizana momba ny fambolena avy amin'ny ivon-toeram-pikarohan' ny Nestlé, any Abidjan. (Fikarohana – Nampahafantarina ny karazam-bary vaovao ho an’ny sakafo mahasalama)
ataon' (nitranga in-2) : Tsy ny sakana ataon'ny polisy na zandary eny amin'ny arabe isak'alina akory no hampandry fahalemana ny tokantrano any anaty elankelan-trano maro any, raha ho an'ny eto an-drenivohitra. (Ny aza voany)
opposition (nitranga in-1) : One generation after another, this is our traditional culture: dictatorship, authoritarianism, and intolerance of opposition. (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
Team (nitranga in-2) : Mitovy koa ny isa azon'ny Fandrefiala sy ny ekipan' ny Dream Team (vondrona B), samy avy eto Analamanga ary samy nahazo isa 5. (Basket ball N1B lehilahy – Mitarika vonjimaika ny TTS Analamanga sy ny JCM Morombe)
peon' (nitranga in-1) : Na samy manana ny hanitra ho azy aza, anisan' ny andrasan'ny mponin'i Toamasina amin'ity fampi- sehoana ity ny fampiaraham- peon'izy mirahalahy. (Pantekôty Toamasina – Hiray sehatra i Nantenaina sy Shyn)
Cosmos (nitranga in-1) : m (65) # Sporting (64)
Cjsoy (nitranga in-1) : Andrasana ihany koa ny lalaon'ny Cjsoi, hatao atsy La Réunion”, hoy Raoelina Andriambololona Tiana, filohan'ny federasionan'ny triathlon. (Fiofanana – Namokatra mpanazatra sivy ny Triathlon)
kandidà (nitranga in-5) : Nahemotra amin'ny 15 jona izao ny fe-potoana ahafahan'ireo kandidà maniry ny hirotsaka hofidiana amin'ny fifidianana solombavambahoaka manatitra ireo antontan-taratasy ilaina amin'izany. (Fifidianana filoha – Mety ho latsaky ny 1 m indray ny halavan’ny biletà tokana)
country (nitranga in-1) : “Lavenona Dragona” (@龙团一灰) naneho hevitra [efa voafafa ny hafatra niaviany],
nogiazana (nitranga in-2) : Kononkononina ny «Dina»
Andrandrain'ny mponina ny fahazoana tamberim-bidy avy amin'ireo andramena nogiazana mba hahafahana mampandroso an'i Mananara Avaratra. (Mananara Avaratra – Misy ambadika ny raharaha andramena)
VICTOIRE (nitranga in-1) : c (66) # AS VICTOIRE (48 )
Vondrona B – B. (Basket ball N1B lehilahy – Mitarika vonjimaika ny TTS Analamanga sy ny JCM Morombe)
Antanifotsy (nitranga in-2) : Nirehitra ny tsena ao amin'ny kaominina Antsaha­maina, any Antanifotsy ny alatsinainy alina teo. (Tapatapany)
Mandiavato (nitranga in-2) : Lehilahy roa no voasambotry ny polisy misahana ny heloka bevava, tany Mandiavato, any amin'ny faritra Itasy sy tany Bongolava ny faramparan'ny volana avrily teo. (Famonoana sinoa vavy – Tafakatra 11 ireo voasambotra, vehivavy iray karohina fatratra)
natomboka (nitranga in-1) : Efa nisy sahady ny «4 andro fampirantiana hosodoko» natomboka omaly ary haharitra hatramin'ny 18 mey, etsy amin'ny Tahala Rarihasina Analakely. (Sary sy hosodoko – Hisokatra amin’ny fialan-tsasatra lehibe ny «sekolin’ny sary» an-dRaparivo)
fanjakagna (nitranga in-1) : Ny fanjakagna mizaha foagna», hoy ireo mponina any an-toerana. (Mananara Avaratra – Misy ambadika ny raharaha andramena)
wall (nitranga in-1) : Nanoratra toy izao ny mpisera Weibo “Bandy goavana mandeha sahala amin'ny Dragona sy ny Tigra” (@大背头龙行虎步) [efa voafafa ny hafatra amin'ny teny shinoa niaviany]:
hilaza (nitranga in-1) : Raha ny filazan'ilay renim-pianakaviana dia « notambatambazany vatomamy ilay zaza ary avy eo dia nanamparany ny filan-dratsiny ary nomeny vola 500 Ariary indray avy eo mba tsy hilaza amin'ny olona izay nanjo azy». (Lazaina Avaradrano – Mpiandry omby voatondro ho nanolana zaza efa-taona)
whatever (nitranga in-1) : As for rights, whatever the civil servants say goes. (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
hanandratana (nitranga in-1) : «Tanjona ny hisian'ny hetsika toy izao isan-taona hanandratana ireo mpanakanto avy any amin'ny faritra Atsinanana», hoy i Nantenaina. (Pantekôty Toamasina – Hiray sehatra i Nantenaina sy Shyn)
Nakba (nitranga in-3) : ho fahatsiarovana ny Andron'ny Nakba, namoaka ny fitantarana an-tsary nohavaoziny farany indrindra ny ekipan'ny ‘Visualizing Palestine' (manomba-maso an'i Palestina) mitondra ny lohateny hoe “Famindra-monina mbola mitohy” izay “mametraka an'isa ny habe sy velaran'ny famindra-monina sy fahaverezan'ny tany Palestiniana. (Fitantarana an-tSary Navoakan'ny Manomba-Maso An'i Palestina Farany Indrindra Ho Fahatsiarovana ny Nakba)
nataon' (nitranga in-4) : Raha ny fanamarihana nataon' ny zandary dia sahala amin'ny olona efa mahay tsianjery ity trano ity mihitsy ireo olona nanafika ireo. (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
hahatsapanao (nitranga in-1) : Raha miaina amin'ny firenena sosialista isika dia tsy afa-mieritreritra zavatra tahaka izany; fa arakaraky ny hieritreretanao azy ireny no hahatsapanao zavatra ratsiratsy kokoa [any anatinao any]. (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
namidy (nitranga in-1) : Efa lany namidy ny fanananay tao an-trano nanavotana azy. (Hopitaly Ambohimiandra – Zaza marary mafy mila famonjena)
hitarafana (nitranga in-1) : Manomana fifaninanana Duathlon sahady izy ireo ny 23 jona izao, ao amin'ny araben'ny Fahaleovantena ao Antsirabe, ka hitarafana ireo taninketsa, efa maro tokoa any an-toerana. (Fiofanana – Namokatra mpanazatra sivy ny Triathlon)
nampiasay (nitranga in-1) : Mbola tsy hita kosa ilay basy marovava nampiasain'izy ireo», hoy ihany ny teo anivon'ny polisim-pirenena. (Famonoana sinoa vavy – Tafakatra 11 ireo voasambotra, vehivavy iray karohina fatratra)
citizenship (nitranga in-1) : Nanoratra toy izao ny mpisera Weibo “Bandy goavana mandeha sahala amin'ny Dragona sy ny Tigra” (@大背头龙行虎步) [efa voafafa ny hafatra amin'ny teny shinoa niaviany]:
nampahafantarina (nitranga in-1) : Etsy an-danin'izay anefa dia misy soson-kevitra ny hitazomana ny endrikendrik'ilay biletà tokana, araka izay efa nanomboka nampahafantarina, andro maromaro izay. (Fifidianana filoha – Mety ho latsaky ny 1 m indray ny halavan’ny biletà tokana)
fihetsiky (nitranga in-1) : mampiahiahy ny zanak'i Mananara Avaratra ny fihetsiky ny manampahefana sasany, izay toa tsy taitra mahita ny fandripahana sy fanondranana ny andramena. (Mananara Avaratra – Misy ambadika ny raharaha andramena)
Rakotovao (nitranga in-1) : Ankohonana mirindra sy lavitry ny olana no tanjona”, hoy kosa Rakotovao Noro, Mpitandrina. (Ady amin’ny herisetra – Mirotsaka ihany koa ny fiangonana)
Nahemotra (nitranga in-1) : Nahemotra amin'ny 15 jona izao ny fe-potoana ahafahan'ireo kandidà maniry ny hirotsaka hofidiana amin'ny fifidianana solombavambahoaka manatitra ireo antontan-taratasy ilaina amin'izany. (Sombiny)
navoaka (nitranga in-1) : ity lahatsoratra ity dia navoakan'i Rachel Wang originally tao amin'ny Tea Leaf Nation (Firenena Ravin-dite) tamin'ny 13 Mey 2013 ary navoaka indray ho anisan'ny fifanarahana fifampizarana votoaty [Endrika natao nanara-bolontany hahamora ny fandikan-dahatsoratra]. (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
hitting (nitranga in-1) : Nanoratra toy izao ny mpisera Weibo “Bandy goavana mandeha sahala amin'ny Dragona sy ny Tigra” (@大背头龙行虎步) [efa voafafa ny hafatra amin'ny teny shinoa niaviany]:
Sandrakatsy (nitranga in-1) : Voaroba i Verezantsoro
Shyn (nitranga in-2) : Io no loha- tenin'ny fampisehoana voalohany hiarahan'i Nantenaina sy Shyn any an-drenivohitr'i Betsimisaraka, ny alahadin'ny Pantekôty 19 mey, hatao ao amin'ny kianja mitafo Soavita. (Pantekôty Toamasina – Hiray sehatra i Nantenaina sy Shyn)
Andrandray (nitranga in-1) : Kononkononina ny «Dina»
sasantsasany (nitranga in-1) : Efa anaty tambajotra matanjaka ireo mpanao «tantely afa-drakotra» ny harem-pirenena ka sarotra ny mamaky ady aminy, araka ny fanazavan'ireo mponina sasantsasany, izay hany sahy miresaka ity raharaha andramena ity. (Mananara Avaratra – Misy ambadika ny raharaha andramena)
fiara (nitranga in-2) : Antso, noho izany, no nalefan'ny Lehiben'ny distrika tamin'ny mponina mba hampitsaharan'izy ireo ny fampanofana fiara na lakana na trano na tokontany amin'ny mpanao andramena. (Mananara Avaratra – Misy ambadika ny raharaha andramena)
fandrobagna (nitranga in-1) : Ny mponina any an-toerana no mahita ifotony ka mitantara ny tena ao ambadiky ny raharaha andramena
«Zaha-poagna sy atô tsy hita ny fandrobagna boaderôzy aty aminay. (Mananara Avaratra – Misy ambadika ny raharaha andramena)
lahadinika (nitranga in-2) : Tsy nahatratra ny salan'isa ilaina, omaly, ny fandaniana ny lahadinika izay tokony haroso hodinihina
mandritra ny fivoriana ara-potoanan'ny Filankevitra ambonin'ny tetezamita. (Sombiny)
Rasoava (nitranga in-1) : Ny vetivety dia samy manana ny azy, fa angamba kosa tsy ho 30 minitra na adiny iray izany ho anareo mpitandro filaminana…
Rina Rasoava. (Ny aza voany)
hiarahan' (nitranga in-3) : Io no loha- tenin'ny fampisehoana voalohany hiarahan'i Nantenaina sy Shyn any an-drenivohitr'i Betsimisaraka, ny alahadin'ny Pantekôty 19 mey, hatao ao amin'ny kianja mitafo Soavita. (« Samy ngeza » – Hifandona eny Mahitsy i Fara John’s sy Onja)
boaderôzy (nitranga in-1) : Ny mponina any an-toerana no mahita ifotony ka mitantara ny tena ao ambadiky ny raharaha andramena
Nestlé (nitranga in-4) : Nisy ny andrana karazam-bary vaovao izay natao tany Anjepy – Manjakandriana, ny volana oktobra 2012, vokatry ny fiaraha-miasan' ny orinasa Nestlé sy ny ivon-toeram-pikarohana ho an'ny fampandrosoana ny eny ambanivohitra, ny foibe fikarohana momba ny fambolena (FOFIFA), ny ivon-toeram-pikarohan' ny Nestlé, any Abidjan (Côte d'Ivoire) ary ireo sekoly ambony samihafa. (Fikarohana – Nampahafantarina ny karazam-bary vaovao ho an’ny sakafo mahasalama)
hahafahana (nitranga in-2) : Ny tsirairay ve moa tsy efa mba miezaka manao izay fomba hahafahana misoroka ny fandrobàna ataon'ny jiolahy, saingy tsy vitany irery izany. (Mananara Avaratra – Misy ambadika ny raharaha andramena)
siantifika (nitranga in-1) : Nana- marina izay ny profesora Roger Randrianasolo, lehiben'ny sampan-
socialist (nitranga in-1) : “Lavenona Dragona” (@龙团一灰) naneho hevitra [efa voafafa ny hafatra niaviany],
notambatambazany (nitranga in-1) : Raha ny filazan'ilay renim-pianakaviana dia « notambatambazany vatomamy ilay zaza ary avy eo dia nanamparany ny filan-dratsiny ary nomeny vola 500 Ariary indray avy eo mba tsy hilaza amin'ny olona izay nanjo azy». (Lazaina Avaradrano – Mpiandry omby voatondro ho nanolana zaza efa-taona)
ekipan' (nitranga in-2) : Mitovy koa ny isa azon'ny Fandrefiala sy ny ekipan' ny Dream Team (vondrona B), samy avy eto Analamanga ary samy nahazo isa 5. (Fitantarana an-tSary Navoakan'ny Manomba-Maso An'i Palestina Farany Indrindra Ho Fahatsiarovana ny Nakba)
will (nitranga in-1) : “Lavenona Dragona” (@龙团一灰) naneho hevitra [efa voafafa ny hafatra niaviany],
nahitana (nitranga in-1) : Fitiliana tamin'ny scanner no nahitana fa simban'ny otrikaretina ireo “alvéoles” amin'ny ilan-tratrany havanana. (Hopitaly Ambohimiandra – Zaza marary mafy mila famonjena)
2012 (nitranga in-1) : Nisy ny andrana karazam-bary vaovao izay natao tany Anjepy – Manjakandriana, ny volana oktobra 2012, vokatry ny fiaraha-miasan' ny orinasa Nestlé sy ny ivon-toeram-pikarohana ho an'ny fampandrosoana ny eny ambanivohitra, ny foibe fikarohana momba ny fambolena (FOFIFA), ny ivon-toeram-pikarohan' ny Nestlé, any Abidjan (Côte d'Ivoire) ary ireo sekoly ambony samihafa. (Fikarohana – Nampahafantarina ny karazam-bary vaovao ho an’ny sakafo mahasalama)
fikirian' (nitranga in-1) : Voalaza fa mety hanamafy ny sazy hampiharina amin'io olom-panjakan'ny tetezamita ny Filankevi-pilaminan'ny Vondrona Afrikanina raha toa ka mbola misy ny fikirian'ny telo tonta hiatrika io fifidianana io. (Vondrona Eoropeana – Mitsipaka ny filatsahan’i Lalao Ravalomanana, Ratsiraka, Rajoelina)
hisian' (nitranga in-1) : «Tanjona ny hisian'ny hetsika toy izao isan-taona hanandratana ireo mpanakanto avy any amin'ny faritra Atsinanana», hoy i Nantenaina. (Pantekôty Toamasina – Hiray sehatra i Nantenaina sy Shyn)
Raharison (nitranga in-2) : Namory ny OMC (Organe mixte de conception) izay ahitana ny Kaomandàn'ny borigadin'ny zandarimaria sy ny Kaomiseran'ny polisy ary nitarina tamin'ny tompon'andraikitry ny ala, ny Lehiben'ny distrika Raharison Mahatombo, tamin'ny volana avrily. (Mananara Avaratra – Misy ambadika ny raharaha andramena)
saribao (nitranga in-1) : Tafakatra hatrany amin'ny 24 000 Ariary ny iray gony amin'ny saribao rehefa miakatra ny jirofo, raha vidiana 8 000 Ariary izany andavanandro. (Mananara Avaratra – Misy ambadika ny raharaha andramena)
hoping (nitranga in-1) : Nanoratra toy izao ny mpisera Weibo “Bandy goavana mandeha sahala amin'ny Dragona sy ny Tigra” (@大背头龙行虎步) [efa voafafa ny hafatra amin'ny teny shinoa niaviany]:
century (nitranga in-1) : The burdens of tradition are way too heavy; democracy might be another century away. (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
lamba (nitranga in-3) : Fotoana mampandeha ny lamba firakotra ihany koa ny vanim-potoana toa izao. (Fiatrehana ririnina – Tsy nisy fiovana ny vidin’ ny bodofotsy eny an-tsena)
siteran' (nitranga in-1) : Nana- marina izay ny profesora Roger Randrianasolo, lehiben'ny sampan-
sorohana (nitranga in-1) : “Azo sorohana tsara, amin'ny alalan'ny sekolin' ny ray aman-dreny, ny olana eo amin'ny ankohonana. (Ady amin’ny herisetra – Mirotsaka ihany koa ny fiangonana)
Nerica (nitranga in-3) : Nisy ny fampitahana ny vokatra avy amin'ny karazam-bary vaovao tamin' ny vary, efa mahazatra ireo tantsaha, ka anisan'ireo natolotra tamin'izany ny karazam-bary Nerica 1,2,4,6, ary 15, ny X-Jigna ary ny Yunkeng. (Fikarohana – Nampahafantarina ny karazam-bary vaovao ho an’ny sakafo mahasalama)
nanakoako (nitranga in-1) : Tamin'ny herinandro teo, nisy kabarin'ny filohan'i Etazonia Barack Obama momba ny lanjan'ny mahaolom-pirenena mandray andraikitra nanakoako tany amin'ny tambajotra sosialy shinoa. (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
Rachel (nitranga in-1) : ity lahatsoratra ity dia navoakan'i Rachel Wang originally tao amin'ny Tea Leaf Nation (Firenena Ravin-dite) tamin'ny 13 Mey 2013 ary navoaka indray ho anisan'ny fifanarahana fifampizarana votoaty [Endrika natao nanara-bolontany hahamora ny fandikan-dahatsoratra]. (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
hevery (nitranga in-1) : Amin'ny alalan'ny Dina no heverin'ny Crdm fa hanatanterahana izany. (Mananara Avaratra – Misy ambadika ny raharaha andramena)
varavaran­kely (nitranga in-1) : Nivadika tany ambadiky ny trano izy ireo avy eo ka novakiany ny varavaran­kely miditra ao an-dakozia. (Ambohibao Antehiroka – Adiny telo no nampihorohoroan’ny jiolahy ny Ben’ny tanàna mivady)
Tabita (nitranga in-2) : Efa manana ivon-toerana natao handraisana sy hihainoana ny olona iharan'izany ity farany, etsy amin'ny foibe Tabita Fjkm, etsy Ampandrana. (Ady amin’ny herisetra – Mirotsaka ihany koa ny fiangonana)
navoakan' (nitranga in-3) : Vao tsy ela anefa izay no samy nanizingizina ny tokony tsy hikitikitihana intsony ny lisitra ofisialin'ireo kandida 41 hiatrika ny fifidianana filoham-pirenena navoakan'ny Fitsarana manokana misahana ny raharaham-pifidianana ny Filohan'ny tetezamita, Andry Rajoelina sy ny Filoha teo aloha, Marc Ravalomanana. (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
nahatrarana (nitranga in-1) : Rehefa natao ny famotorana azy dia nanondro olona iray hafa izy ka tany Bongolava no nahatrarana ilay olona io », hoy ny tatitra avy amin'ny polisim-pirenena. (Famonoana sinoa vavy – Tafakatra 11 ireo voasambotra, vehivavy iray karohina fatratra)
tarigetran' (nitranga in-1) : Na miara-mirona na miara-mihenahena no toa tarigetran'izy rehetra. (Kajikajy)
Shina (nitranga in-3) : Na dia tsy vao sambany aza ny mpiserasera shinoa no nampitaha ny zavamisy any Shina sy ao Etazonia, dia niteraka adi-hevitra momba ny zo sy adidin'ny vahoaka shinoa indray ny lohahevitra momba ny “maha-olompirenena”. (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
Managnara (nitranga in-1) : Ny tangalamena Bonsantiry dia nivaky fa «botry sy sambo kely mahazaka entana 50 hatramin'ny 100 taonina miisa am-polony isam-bolana no mivoaka ny reniranon'i Managnara, mitondra andramena aondrana any an-tsambo efa miandry eny afovoan-dranomasina tsy lavitra ny morontsirak'i Mananara». (Mananara Avaratra – Misy ambadika ny raharaha andramena)
Sambava (nitranga in-1) : Mitaraina mantsy ny zanak'i Mananara, hoy izy, fa rehefa tonga ny andro iray dia ireo tompon-tany no miditra am-ponja «fa ry zareo tena tompon'andraikitra avy any Sambava na Antalaha na Antananarivo lasa mitsoaka». (Mananara Avaratra – Misy ambadika ny raharaha andramena)
nafatony (nitranga in-1) : «Raha vantany vao tafiditra tao an-trano izy ireo dia ny mpiambina roa lahy no nafatony voalohany. (Ambohibao Antehiroka – Adiny telo no nampihorohoroan’ny jiolahy ny Ben’ny tanàna mivady)
voafaritry (nitranga in-2) : Araka ny voafaritry ny sori-dalana dia «tokony hisy ny lalàna holanian'ny parlemantan'ny tetezamita afahana mampihatra ilay fiaraha-mitantana telo loha ». (Mananara Avaratra – Misy ambadika ny raharaha andramena)
Dream (nitranga in-2) : Mitovy koa ny isa azon'ny Fandrefiala sy ny ekipan' ny Dream Team (vondrona B), samy avy eto Analamanga ary samy nahazo isa 5. (Basket ball N1B lehilahy – Mitarika vonjimaika ny TTS Analamanga sy ny JCM Morombe)
tradition (nitranga in-1) : The burdens of tradition are way too heavy; democracy might be another century away. (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
fampirantiana (nitranga in-2) : Efa nisy sahady ny «4 andro fampirantiana hosodoko» natomboka omaly ary haharitra hatramin'ny 18 mey, etsy amin'ny Tahala Rarihasina Analakely. (Sary sy hosodoko – Hisokatra amin’ny fialan-tsasatra lehibe ny «sekolin’ny sary» an-dRaparivo)
hanozona (nitranga in-1) : a ary langilangy sy ny sisa ve moa dia hanozona fa toa mba nanindrona ny mponina tany amin'ireo tanàna tsy milamina ihany ilay filazan'ny Emmo/Far fa tsaho fotsiny ny resaka fampilazan'ny jiolahy mialoha fa hanafika izy ireo. (Ny aza voany)
Anjepy (nitranga in-1) : Nisy ny andrana karazam-bary vaovao izay natao tany Anjepy – Manjakandriana, ny volana oktobra 2012, vokatry ny fiaraha-miasan' ny orinasa Nestlé sy ny ivon-toeram-pikarohana ho an'ny fampandrosoana ny eny ambanivohitra, ny foibe fikarohana momba ny fambolena (FOFIFA), ny ivon-toeram-pikarohan' ny Nestlé, any Abidjan (Côte d'Ivoire) ary ireo sekoly ambony samihafa. (Fikarohana – Nampahafantarina ny karazam-bary vaovao ho an’ny sakafo mahasalama)
Carlton (nitranga in-1) : ireo mpanazatra vao nahavita fiofanana amin'ny taranja Triathlon
hitondra (nitranga in-2) : Nomarihin'ity farany rahateo fa «ilaina ny fanajana ny sori-dalana ary tokony hiara-misalahy hitady izay fomba rehetra ahitana lamina politika hitondra ho any amin'ny fitoniana ka ahafahan'i Madagasikara miroso any amin'ny fifidianana ny mpanao politika malagasy». (Mananara Avaratra – Misy ambadika ny raharaha andramena)
hampandry (nitranga in-1) : Tsy ny sakana ataon'ny polisy na zandary eny amin'ny arabe isak'alina akory no hampandry fahalemana ny tokantrano any anaty elankelan-trano maro any, raha ho an'ny eto an-drenivohitra. (Ny aza voany)
nandiavana (nitranga in-1) : Nanontany tena ny mpisera “Hula Baopei” (@呼啦啦啦宝宝_佩) : 当国内大学生一毕业便面临高房价、物价而不得不屈服于现实失去梦想时，美国青年却可以以祖国未来为己任，被赋予强大的公民意识，坚定不移的实现自己的梦想、承担国家发展之重任，我在想中国的未来在哪里？下一代的未来在哪里？ Raha milefitra manoloana ny zava-misy ny mpianatry ny kolejy shinoa ka tsy mahatadidy intsony ny nofinofiny manoloana ny fahalafosana sy ny tsy fahatakarana ny zo hanam-ponenana aorian'ny nandiavana ny kolejy, Afa-mametraka ny hoavin'ny tanindrazany ho iraka ataony manokana kosa ny tanora Amerikana; efa tsara volavola tao amin'ny fahatsa.... (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
Pete (nitranga in-1) : 000 ny mpanaraka azy no mandrisika [zh] hihainoan'ny tanora shinoa ilay kabary: (Sary ofisialy avy amin'ny Trano Fotsy nalain'i Pete Souza) 奥巴马昨天在俄亥俄州立大学的毕业典礼上演讲，演讲的核心是“公民意识”。我把他的演讲稿匆匆翻译了下来，就是觉得，中国的年轻人，也许更应该接受这样在中国的课堂里接受不到的教育。 Ny fototry ny kabarim-pisokafan'ny taom-pianarana nataon'i Obama omaly tao amin'ny Oniversitem-panjakana ao Ohio dia ny ‘ny fahatsapana mahaolom-pirenena, adikako vinaninany tahaka izay ilay kabariny, satria tsapako fa mety tena mila karazam-panabeazana toy izany mihitsy n.... (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
Rasolofo (nitranga in-2) : ny kolonely Rasolofo Lumène
hiofana (nitranga in-1) : Ao Moramanga ihany ity sekoly vaovao atsangana ity araka ny fantatra, ka aorian' ny fitsanganan'izany dia tsy ho any Antsirabe intsony ny mpianatra ho manamboninahitra zandary no hiofana. (Fanofanana manamboninahitra – Hangataka Akademia manokana ny zandarimariam-pirenena)
hanafika (nitranga in-1) : a ary langilangy sy ny sisa ve moa dia hanozona fa toa mba nanindrona ny mponina tany amin'ireo tanàna tsy milamina ihany ilay filazan'ny Emmo/Far fa tsaho fotsiny ny resaka fampilazan'ny jiolahy mialoha fa hanafika izy ireo. (Ny aza voany)
Tahala (nitranga in-1) : Efa nisy sahady ny «4 andro fampirantiana hosodoko» natomboka omaly ary haharitra hatramin'ny 18 mey, etsy amin'ny Tahala Rarihasina Analakely. (Sary sy hosodoko – Hisokatra amin’ny fialan-tsasatra lehibe ny «sekolin’ny sary» an-dRaparivo)
Bonsantiry (nitranga in-1) : Ny tangalamena Bonsantiry dia nivaky fa «botry sy sambo kely mahazaka entana 50 hatramin'ny 100 taonina miisa am-polony isam-bolana no mivoaka ny reniranon'i Managnara, mitondra andramena aondrana any an-tsambo efa miandry eny afovoan-dranomasina tsy lavitra ny morontsirak'i Mananara». (Mananara Avaratra – Misy ambadika ny raharaha andramena)
Antevialabe (nitranga in-1) : Voaroba i Verezantsoro
kalitaony (nitranga in-2) : Ar 10 000 ka hatramin' ny Ar 80 000 ny saran'ny bodofotsy eny an-tsena, arakaraka ny hateviny sy ny kalitaony. (Fiatrehana ririnina – Tsy nisy fiovana ny vidin’ ny bodofotsy eny an-tsena)
acapella (nitranga in-1) : Hisy ny acapella, Reggae ary indrindra ny fitrandrahana ny basesa, hoentin'i Nantenaina. (Pantekôty Toamasina – Hiray sehatra i Nantenaina sy Shyn)
nampahafantatra (nitranga in-1) : Ligy vaovao
ankizivavikely (nitranga in-1) : lehilahy iray no voatondro ho nanolana ankizivavikely iray efa-taona, tany Lazaina Avaradrano. (Lazaina Avaradrano – Mpiandry omby voatondro ho nanolana zaza efa-taona)
atrikasa (nitranga in-2) : omaly no naseho ireo karazam-bary nanaovana fikarohana
avrily (nitranga in-3) : tafakatra 11 ireo olona voasambotra mikasika ilay raharaha famonoana sinoa vavy, tetsy Andoharanofotsy, ny alin'ny 12 avrily lasa teo. (Mananara Avaratra – Misy ambadika ny raharaha andramena)
mifampiahiahy (nitranga in-1) : Matoa anefa samy mifampiahiahy ohatr'izay dia samy manan-kevitra ny hanararaotra ny fahefana maha mpitondra mba hahazoana tombony amin'ny maha kandidà. (Kajikajy)
Toamasina (nitranga in-3) : Sambany ny fiarahan'izy roa lahy an-tsehatra ao Toamasina, araka ny fanamby napetrak'i Nantenaina ho an'ny vahoakan'i Toamasina. (Pantekôty Toamasina – Hiray sehatra i Nantenaina sy Shyn)
biletà (nitranga in-5) : mety tsy hanana halava iray metatra mahery toy ny teo aloha intsony fa ahena araka izay tratra ny biletà tokana hampiasaina amin'ny fifidianana filoham-pirenena. (Fifidianana filoha – Mety ho latsaky ny 1 m indray ny halavan’ny biletà tokana)
Palestine' (nitranga in-1) : ho fahatsiarovana ny Andron'ny Nakba, namoaka ny fitantarana an-tsary nohavaoziny farany indrindra ny ekipan'ny ‘Visualizing Palestine' (manomba-maso an'i Palestina) mitondra ny lohateny hoe “Famindra-monina mbola mitohy” izay “mametraka an'isa ny habe sy velaran'ny famindra-monina sy fahaverezan'ny tany Palestiniana. (Fitantarana an-tSary Navoakan'ny Manomba-Maso An'i Palestina Farany Indrindra Ho Fahatsiarovana ny Nakba)
Analamanga (nitranga in-3) : Mitarika vonjimaika ao anatin'ny fifanintsanana ny TTS Analamanga (vondrona C) sy ny JCM Morombe (vondrona A), samy nahazo isa 6. (Basket ball N1B lehilahy – Mitarika vonjimaika ny TTS Analamanga sy ny JCM Morombe)
hanomezana (nitranga in-1) : Takianay ny hanomezana tamberim-bidy anay avy amin'ireo andramena nogiazana», hoy Rabemazava Soa Jean. (Mananara Avaratra – Misy ambadika ny raharaha andramena)
nanafika (nitranga in-2) : sahalan'ny efa mahay tsianjery ny tao an-tranon' ilay Ben'ny tanàna voatafika tety amin'ny faritra Ambohibao mihitsy ireo jiolahy, raha ny filazan' ireo zandary
TROTTERS (nitranga in-1) : s C (62)
nanombohana (nitranga in-1) : Izany no “taharo (fanaovana) saosy saozaha shinoa”, izay mifarana ho mainty avokoa ny zavatra rehetra na inona na inona ny nanombohana azy. (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
adidy (nitranga in-3) : Na dia tsy vao sambany aza ny mpiserasera shinoa no nampitaha ny zavamisy any Shina sy ao Etazonia, dia niteraka adi-hevitra momba ny zo sy adidin'ny vahoaka shinoa indray ny lohahevitra momba ny “maha-olompirenena”. (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
aretina (nitranga in-3) : Tratran'ny aretina sarotra sitranina amin'ny havokavoka izy. (Hopitaly Ambohimiandra – Zaza marary mafy mila famonjena)
natao (nitranga in-7) : Rehefa natao ny famotorana azy dia nanondro olona iray hafa izy ka tany Bongolava no nahatrarana ilay olona io », hoy ny tatitra avy amin'ny polisim-pirenena. (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
LAZAN (nitranga in-1) : a (67) # LAZAN BETSILEO (78)
ampihorohoroana (nitranga in-1) : na resaka tiana haely, na tsahobe ampihorohoroana, tsy azo terena hilamin-tsaina fotsiny ny isan-tokantrano manoloana ny tsy fandriampahalemana ankehitriny. (Ny aza voany)
andraikitry (nitranga in-1) : samy te hifikitra mafy eo amin'ny sezany ireo tompon' andraikitry ny tetezamita nirotsaka ho kandidà amin'ny fifidianana filoham-pirenena. (Kajikajy)
ofi­sialy (nitranga in-1) : Araka ny vaovao mbola tsy ofi­sialy avy amin'ireo manam-pahaizana manokana momba ny raharaham-pifidianana, omaly, dia «mety hajanona ho taratasy tokana amin'ny endrika A3 ihany io biletà io». (Fifidianana filoha – Mety ho latsaky ny 1 m indray ny halavan’ny biletà tokana)
nijery (nitranga in-1) : Efa tonga nijery ifotony ny fahavoazana, ny lehiben'ny distrika ao Antanifotsy. (Tapatapany)
fahazoana (nitranga in-1) : Kononkononina ny «Dina»
Rakotonandrasana (nitranga in-1) : Vao voalohany no nahitako aretina toy izao tao anatin'ny 15 taona niasako”, hoy Dr Rakotonandrasana David Harimbola, mpitsabo ankizy manara-maso ny fahasalamany eny Ambohimiandra. (Hopitaly Ambohimiandra – Zaza marary mafy mila famonjena)
kalitaon' (nitranga in-1) : Hirosoana ihany koa, araka ny voalaza ny atrikasam-piofanana ho an'ny zandary efa am-perinasa mba ho fanatsarana ny kalitaon'ny asan'izy ireo. (Fanofanana manamboninahitra – Hangataka Akademia manokana ny zandarimariam-pirenena)
mpanatanteraky (nitranga in-2) : nanohana ny fanambaran'ny «Troïka», rafitra mpanatanteraky ny Vondrona Sadc, izay nilaza ny tokony hisintahan'ny Filohan'ny tetezamita, Andry Rajoelina sy ny Filoha teo aloha, ny amiraly Didier Ratsiraka ary i Lalao Ravalomanana, amin'ny fifidianana Filoham-pirnena ihany koa ny Vondrona Eoropeana. (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
nahasamboran' (nitranga in-1) : « Nanao fanafihana mitam-piadiana tany Mandiavato no nahasamboran'ny polisy ny iray tamin'izy ireo. (Famonoana sinoa vavy – Tafakatra 11 ireo voasambotra, vehivavy iray karohina fatratra)
burdens (nitranga in-1) : The burdens of tradition are way too heavy; democracy might be another century away. (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
nitarina (nitranga in-1) : Namory ny OMC (Organe mixte de conception) izay ahitana ny Kaomandàn'ny borigadin'ny zandarimaria sy ny Kaomiseran'ny polisy ary nitarina tamin'ny tompon'andraikitry ny ala, ny Lehiben'ny distrika Raharison Mahatombo, tamin'ny volana avrily. (Mananara Avaratra – Misy ambadika ny raharaha andramena)
Marc (nitranga in-1) : Vao tsy ela anefa izay no samy nanizingizina ny tokony tsy hikitikitihana intsony ny lisitra ofisialin'ireo kandida 41 hiatrika ny fifidianana filoham-pirenena navoakan'ny Fitsarana manokana misahana ny raharaham-pifidianana ny Filohan'ny tetezamita, Andry Rajoelina sy ny Filoha teo aloha, Marc Ravalomanana. (Vondrona Eoropeana – Mitsipaka ny filatsahan’i Lalao Ravalomanana, Ratsiraka, Rajoelina)
fahabangana (nitranga in-1) : Mba hisorohana ny mety ho fahabangana, araka ny lalàna, aterak'izay rehetra izay no voalaza fa antony handinihana amin'ny antsipiriany io andininy io. (Fiaraha-mitantana ny tetezamita – Hampitovy tadin-dokanga Rajoelina, Beriziky, Rakotoarivelo ary Rasolosoa Dolin)
twitter (nitranga in-2) : Mpanoratra Tea Leaf Nation · Nandika Jentilisa
anisan' (nitranga in-4) : Na samy manana ny hanitra ho azy aza, anisan' ny andrasan'ny mponin'i Toamasina amin'ity fampi- sehoana ity ny fampiaraham- peon'izy mirahalahy. (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
nanamparany (nitranga in-1) : Raha ny filazan'ilay renim-pianakaviana dia « notambatambazany vatomamy ilay zaza ary avy eo dia nanamparany ny filan-dratsiny ary nomeny vola 500 Ariary indray avy eo mba tsy hilaza amin'ny olona izay nanjo azy». (Lazaina Avaradrano – Mpiandry omby voatondro ho nanolana zaza efa-taona)
lalàna (nitranga in-4) : Mba hisorohana ny mety ho fahabangana, araka ny lalàna, aterak'izay rehetra izay no voalaza fa antony handinihana amin'ny antsipiriany io andininy io. (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
idealy (nitranga in-1) : Tao amin'ny kabarim-panombohana tamin'ny 5 mey ny filoha Obama no nilaza, ”Tsy tsimpontsimpom-bahiny isika…samy manana andraikitra manoloana ny hafa amin'ny alalan'ny fananganana idealy sy lalàna ary ny fanolora-tena isika. (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
draharaha (nitranga in-1) : Nana- marina izay ny profesora Roger Randrianasolo, lehiben'ny sampan-
visualizingpalestine (nitranga in-1) : visualizingpalestine. (Fitantarana an-tSary Navoakan'ny Manomba-Maso An'i Palestina Farany Indrindra Ho Fahatsiarovana ny Nakba)
saozaha (nitranga in-1) : Izany no “taharo (fanaovana) saosy saozaha shinoa”, izay mifarana ho mainty avokoa ny zavatra rehetra na inona na inona ny nanombohana azy. (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
nanavotana (nitranga in-1) : Efa lany namidy ny fanananay tao an-trano nanavotana azy. (Hopitaly Ambohimiandra – Zaza marary mafy mila famonjena)
Rakoto­arivelo (nitranga in-1) : hifanakalo hevitra amin' ny Praiminisitra Omer Beri­ziky, ny filohan'ny Kaongresy, Mamy Rakoto­arivelo ary ny filohan'ny Filankevitra ambonin'ny tetezamita, ny jeneraly Dolin Rasolosoa mahakasika ny fiaraha-mitantana ny tetezamita aorian'ny fametraham-pialany, ny Filohan'ny tetezamita, Andry Rajoelina, anio hariva. (Fiaraha-mitantana ny tetezamita – Hampitovy tadin-dokanga Rajoelina, Beriziky, Rakotoarivelo ary Rasolosoa Dolin)
everything (nitranga in-1) : This is ‘soy-sauce vat' China, where everything ends up black [corrupt] regardless of how it started out. (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
Facebook (nitranga in-1) : ”
halatr' (nitranga in-1) : Matetika no isehoana halatr'omby toy izao ny ao amin'ity tanàna ity. (Tapatapany)
mampitsinjaka (nitranga in-1) : Ny gadona salegy no tena ahafantarana an'i Farah John's ary anisan' ny mampiavaka azy ny fahaizany manetsika sy mampitsinjaka ireo mpijery. (« Samy ngeza » – Hifandona eny Mahitsy i Fara John’s sy Onja)
hanaovana (nitranga in-1) : Ny fe-potoana hanaovana izany anefa no fantatra fa mety tsy ho ampy intsony. (Fiaraha-mitantana ny tetezamita – Hampitovy tadin-dokanga Rajoelina, Beriziky, Rakotoarivelo ary Rasolosoa Dolin)
hitadiavan' (nitranga in-1) : Ny zava-misy, ny taona 2013 no heverina fa fotoan-tsarotra indrindra hitadiavan'asa ho an'i Shina maoderina. (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
Leonidas (nitranga in-1) : Tamin'iny herinandro lasa iny rahateo dia mbola nanamafy ny amin'ny tokony hitazonana ireo tetiandrom-pifidianana napetraky ny Cenit sy ny Firenena Mikambana ny Masoivohon'ny Vondrona Eoropeana, Leonidas Tezapsidis. (Vondrona Eoropeana – Mitsipaka ny filatsahan’i Lalao Ravalomanana, Ratsiraka, Rajoelina)
minisiteran' (nitranga in-1) : Vao nalefa any amin'ny minisiteran'ny Foloalindahy ny fangatahana izany, araka ny tsilian-tsofina. (Fanofanana manamboninahitra – Hangataka Akademia manokana ny zandarimariam-pirenena)
VisualizingPalestine (nitranga in-1) : org/disappearing-palestine
borigady (nitranga in-1) : Namory ny OMC (Organe mixte de conception) izay ahitana ny Kaomandàn'ny borigadin'ny zandarimaria sy ny Kaomiseran'ny polisy ary nitarina tamin'ny tompon'andraikitry ny ala, ny Lehiben'ny distrika Raharison Mahatombo, tamin'ny volana avrily. (Mananara Avaratra – Misy ambadika ny raharaha andramena)
tsahobe (nitranga in-1) : na resaka tiana haely, na tsahobe ampihorohoroana, tsy azo terena hilamin-tsaina fotsiny ny isan-tokantrano manoloana ny tsy fandriampahalemana ankehitriny. (Ny aza voany)
David (nitranga in-1) : Vao voalohany no nahitako aretina toy izao tao anatin'ny 15 taona niasako”, hoy Dr Rakotonandrasana David Harimbola, mpitsabo ankizy manara-maso ny fahasalamany eny Ambohimiandra. (Hopitaly Ambohimiandra – Zaza marary mafy mila famonjena)
Nanontany (nitranga in-1) : Nanontany tena ny mpisera “Hula Baopei” (@呼啦啦啦宝宝_佩) : 当国内大学生一毕业便面临高房价、物价而不得不屈服于现实失去梦想时，美国青年却可以以祖国未来为己任，被赋予强大的公民意识，坚定不移的实现自己的梦想、承担国家发展之重任，我在想中国的未来在哪里？下一代的未来在哪里？ Raha milefitra manoloana ny zava-misy ny mpianatry ny kolejy shinoa ka tsy mahatadidy intsony ny nofinofiny manoloana ny fahalafosana sy ny tsy fahatakarana ny zo hanam-ponenana aorian'ny nandiavana ny kolejy, Afa-mametraka ny hoavin'ny tanindrazany ho iraka ataony manokana kosa ny tanora Amerikana; efa tsara volavola tao amin'ny fahatsa.... (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
vat' (nitranga in-1) : This is ‘soy-sauce vat' China, where everything ends up black [corrupt] regardless of how it started out. (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
Antanambe (nitranga in-1) : Voaroba i Verezantsoro
habe (nitranga in-1) : ho fahatsiarovana ny Andron'ny Nakba, namoaka ny fitantarana an-tsary nohavaoziny farany indrindra ny ekipan'ny ‘Visualizing Palestine' (manomba-maso an'i Palestina) mitondra ny lohateny hoe “Famindra-monina mbola mitohy” izay “mametraka an'isa ny habe sy velaran'ny famindra-monina sy fahaverezan'ny tany Palestiniana. (Fitantarana an-tSary Navoakan'ny Manomba-Maso An'i Palestina Farany Indrindra Ho Fahatsiarovana ny Nakba)
about (nitranga in-2) : “Lavenona Dragona” (@龙团一灰) naneho hevitra [efa voafafa ny hafatra niaviany],
nodinihy (nitranga in-1) : Fanapahan-kevitra noraisin'ny Cenit, izay nomena nodinihin'ny governemantan'ny tetezamita io. (Sombiny)
Catherine (nitranga in-1) : Manova tanteraka ny fizotran'ny fifidianana io firotsahan'ny telo tonta io ary mifanohitra amin'ny fifanarahana nisy teo aloha», araka ny fanambaràna nataon'i Catherine Ashton, tompon'andraikitra ambony eo anivon'ny Vondrona Eoropeana, omaly. (Vondrona Eoropeana – Mitsipaka ny filatsahan’i Lalao Ravalomanana, Ratsiraka, Rajoelina)
50%n' (nitranga in-1) : Tamin'ny 1948, mihoatra ny 50%n'ny Palestiniana manontolo no voadio ara-poko. (Fitantarana an-tSary Navoakan'ny Manomba-Maso An'i Palestina Farany Indrindra Ho Fahatsiarovana ny Nakba)
Mitohy' (nitranga in-1) : Ho fahatsiarovana ny Nakba, sy ny famindra-monina izay mitohy mandraka ankehitriny, dia mamoaka ny ‘Famindra-monina Mbola Mitohy' izahay. (Fitantarana an-tSary Navoakan'ny Manomba-Maso An'i Palestina Farany Indrindra Ho Fahatsiarovana ny Nakba)
nilaza (nitranga in-3) : Raha ny tatitry ny mpitandro ny filaminana hatrany dia «nifona tamin'ny ray aman-drenin'io zaza io ity lehilahy sady nilaza fa tsy vita hatramin'ny farany ny fikasan-dratsiny satria nikiakiaka nitomany ilay zaza ka dia navelany». (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
Manjakandriana (nitranga in-1) : Nisy ny andrana karazam-bary vaovao izay natao tany Anjepy – Manjakandriana, ny volana oktobra 2012, vokatry ny fiaraha-miasan' ny orinasa Nestlé sy ny ivon-toeram-pikarohana ho an'ny fampandrosoana ny eny ambanivohitra, ny foibe fikarohana momba ny fambolena (FOFIFA), ny ivon-toeram-pikarohan' ny Nestlé, any Abidjan (Côte d'Ivoire) ary ireo sekoly ambony samihafa. (Fikarohana – Nampahafantarina ny karazam-bary vaovao ho an’ny sakafo mahasalama)
hihainoan' (nitranga in-1) : 000 ny mpanaraka azy no mandrisika [zh] hihainoan'ny tanora shinoa ilay kabary: (Sary ofisialy avy amin'ny Trano Fotsy nalain'i Pete Souza) 奥巴马昨天在俄亥俄州立大学的毕业典礼上演讲，演讲的核心是“公民意识”。我把他的演讲稿匆匆翻译了下来，就是觉得，中国的年轻人，也许更应该接受这样在中国的课堂里接受不到的教育。 Ny fototry ny kabarim-pisokafan'ny taom-pianarana nataon'i Obama omaly tao amin'ny Oniversitem-panjakana ao Ohio dia ny ‘ny fahatsapana mahaolom-pirenena, adikako vinaninany tahaka izay ilay kabariny, satria tsapako fa mety tena mila karazam-panabeazana toy izany mihitsy n.... (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
Hong (nitranga in-1) : Nilaza ny heviny [zh] i Yin Hong (@尹鸿), zokiolona mpanatanteraky ny Sekolin'ny fanaovan-gazety sy ny fifandraisana Tsinghua:
Nomarihy (nitranga in-3) : Nomarihin'ity farany ihany koa fa miandry izay fanapahan-kevitra horai-sin'ny Filankevi-pilaminan'ny Vondrona Afrikanina izy ireo ahafantarana ny ho tohin'ity raharaha ity. (Mananara Avaratra – Misy ambadika ny raharaha andramena)
civil (nitranga in-1) : As for rights, whatever the civil servants say goes. (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
iharan' (nitranga in-1) : Efa manana ivon-toerana natao handraisana sy hihainoana ny olona iharan'izany ity farany, etsy amin'ny foibe Tabita Fjkm, etsy Ampandrana. (Ady amin’ny herisetra – Mirotsaka ihany koa ny fiangonana)
Hotel (nitranga in-2) : ireo mpanazatra vao nahavita fiofanana amin'ny taranja Triathlon
Natao teny amin'ny Kudeta, tetsy amin'ny Hotel Carlton, omaly ny fizaràna ny mari-pahaizana ho an' ireo sivy mirahalahy niofana ho mpanazatra, dingana voalohany eo amin'ny taranja Triathlon. (Fikarohana – Nampahafantarina ny karazam-bary vaovao ho an’ny sakafo mahasalama)
start (nitranga in-1) : Nanoratra toy izao ny mpisera Weibo “Bandy goavana mandeha sahala amin'ny Dragona sy ny Tigra” (@大背头龙行虎步) [efa voafafa ny hafatra amin'ny teny shinoa niaviany]:
Raparivo (nitranga in-4) : 56 taona nanaovana sary hosodoko, hankalazaina amin'ny taona ho avy ny faha-80 taona nahaterahan-dRaparivo Roland Ramaheninarivo, na Raparivo R. (Sary sy hosodoko – Hisokatra amin’ny fialan-tsasatra lehibe ny «sekolin’ny sary» an-dRaparivo)
nanabevoho (nitranga in-1) : Tsy misy afa-tsy kajy ny tontolon' ny politika saingy misy ireo efa tena nahay io taranja io hatrany am-pianarana, misy ireo efa teo amin'ny toerany vao tena nanabevoho ny fahaizany. (Kajikajy)
maizy (nitranga in-1) : Tsy nafenin-dRaharison Mahatombo fa mametraka olana ara-piarahamonina ny fandraisana fepetra famaizana ny raharaha maizin'ny andramena. (Mananara Avaratra – Misy ambadika ny raharaha andramena)
Obama (nitranga in-4) : Tamin'ny herinandro teo, nisy kabarin'ny filohan'i Etazonia Barack Obama momba ny lanjan'ny mahaolom-pirenena mandray andraikitra nanakoako tany amin'ny tambajotra sosialy shinoa. (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
Wang (nitranga in-1) : ity lahatsoratra ity dia navoakan'i Rachel Wang originally tao amin'ny Tea Leaf Nation (Firenena Ravin-dite) tamin'ny 13 Mey 2013 ary navoaka indray ho anisan'ny fifanarahana fifampizarana votoaty [Endrika natao nanara-bolontany hahamora ny fandikan-dahatsoratra]. (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
intolerance (nitranga in-1) : One generation after another, this is our traditional culture: dictatorship, authoritarianism, and intolerance of opposition. (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
Ivontoerana (nitranga in-1) : Ho tsangambaton'ny faha-80 taona io ny fananganana ny «sekolin'ny sary», hiarahan'ny Raparivo sy ireo taranany amin'ny Ivontoerana ho an'ny Kolontsaina Malagasy na ny IKM. (Sary sy hosodoko – Hisokatra amin’ny fialan-tsasatra lehibe ny «sekolin’ny sary» an-dRaparivo)
Ambohi­bao (nitranga in-1) : Mbola tsy fantatra kosa anefa izay tena tetibidin'ireo entana very ireo satria mbola tsy nanaovana fanadihadiana izy mivady vokatry ny hatairana nahazo azy ireo», hoy ihany ny fanazavan' ny zandary, avy etsy Ambohi­bao. (Ambohibao Antehiroka – Adiny telo no nampihorohoroan’ny jiolahy ny Ben’ny tanàna mivady)
Hanakoako (nitranga in-1) : Hanakoako eny mihitsy eny izany ny “samy mandefitra”, “Fanambalia”, “Tsisy quoi”… ampian-dry “Assuré”, “Confiance”, “Jalousie”. (« Samy ngeza » – Hifandona eny Mahitsy i Fara John’s sy Onja)
Crdm (nitranga in-2) : Teo anivon'ny Sehatra fifampidinihana Crdm no nitsiry ny hevitra hametrahana Dina ho amin'izany. (Mananara Avaratra – Misy ambadika ny raharaha andramena)
Ashton (nitranga in-1) : Manova tanteraka ny fizotran'ny fifidianana io firotsahan'ny telo tonta io ary mifanohitra amin'ny fifanarahana nisy teo aloha», araka ny fanambaràna nataon'i Catherine Ashton, tompon'andraikitra ambony eo anivon'ny Vondrona Eoropeana, omaly. (Vondrona Eoropeana – Mitsipaka ny filatsahan’i Lalao Ravalomanana, Ratsiraka, Rajoelina)
Jean (nitranga in-5) : «Izahay miteny izao tsy misy »parapluie » fa Andriamanitra an-tampon'ny loha no ianteherana», hoy Rabemazava Soa Jean, raha namaky bantsilana fa fanta-poko, fanta-pirenena ny tompon'ny sambo anondranana ireo andramena any Mananara Avaratra. (Mananara Avaratra – Misy ambadika ny raharaha andramena)
novakiany (nitranga in-1) : Nivadika tany ambadiky ny trano izy ireo avy eo ka novakiany ny varavaran­kely miditra ao an-dakozia. (Ambohibao Antehiroka – Adiny telo no nampihorohoroan’ny jiolahy ny Ben’ny tanàna mivady)
namatotra (nitranga in-1) : Rehefa tafiditra tao amin'ny efitranon'izy mivady ireo jiolahy dia namatotra ny vadin'ilay Ben'ny tanàna. (Ambohibao Antehiroka – Adiny telo no nampihorohoroan’ny jiolahy ny Ben’ny tanàna mivady)
mpisera (nitranga in-3) : Nanoratra ny mpisera Weibo iray hafa, “Efa natavy” (@曾经的胖胖胖胖):
vidiana (nitranga in-1) : Tafakatra hatrany amin'ny 24 000 Ariary ny iray gony amin'ny saribao rehefa miakatra ny jirofo, raha vidiana 8 000 Ariary izany andavanandro. (Mananara Avaratra – Misy ambadika ny raharaha andramena)
propagandy (nitranga in-1) : Ny fahatsapana ho olom-pirenena dia mety hidika zavatra mihoatra ny (fananana) fisainana mahaleo tena sy manome hevitra izay samy hafa amin'ny propagandy fanaon'ny governemanta shinoa. (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
shinoa (nitranga in-11) : Tamin'ny herinandro teo, nisy kabarin'ny filohan'i Etazonia Barack Obama momba ny lanjan'ny mahaolom-pirenena mandray andraikitra nanakoako tany amin'ny tambajotra sosialy shinoa. (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
Maraoka (nitranga in-1) : Handefa an'i Zouzou hiady ny amboara afrikanina any Agadir, Maraoka kosa ny 28 mey ho avy izao. (Fiofanana – Namokatra mpanazatra sivy ny Triathlon)
Africa (nitranga in-1) : «Teo anivon' ny toeram-pikarohana Africa Rice sy ny FOFIFA no nahazoana ilay karazam- bary Nerica, nofidiana manokana noho ny singa ao anatiny sy ny hery entiny», hoy kosa Philippe Courbet, manam-pahaizana momba ny fambolena avy amin'ny ivon-toeram-pikarohan' ny Nestlé, any Abidjan. (Fikarohana – Nampahafantarina ny karazam-bary vaovao ho an’ny sakafo mahasalama)
namaky (nitranga in-1) : «Izahay miteny izao tsy misy »parapluie » fa Andriamanitra an-tampon'ny loha no ianteherana», hoy Rabemazava Soa Jean, raha namaky bantsilana fa fanta-poko, fanta-pirenena ny tompon'ny sambo anondranana ireo andramena any Mananara Avaratra. (Mananara Avaratra – Misy ambadika ny raharaha andramena)
vahoakan' (nitranga in-1) : Sambany ny fiarahan'izy roa lahy an-tsehatra ao Toamasina, araka ny fanamby napetrak'i Nantenaina ho an'ny vahoakan'i Toamasina. (Pantekôty Toamasina – Hiray sehatra i Nantenaina sy Shyn)
sehoana (nitranga in-2) : Na samy manana ny hanitra ho azy aza, anisan' ny andrasan'ny mponin'i Toamasina amin'ity fampi- sehoana ity ny fampiaraham- peon'izy mirahalahy. (« Samy ngeza » – Hifandona eny Mahitsy i Fara John’s sy Onja)
Andriantsiferanarivo (nitranga in-2) : Barphil Andriantsiferanarivo. (Fiofanana – Namokatra mpanazatra sivy ny Triathlon)
Imerimanjaka (nitranga in-1) : Marary mafy ka mila fanafody mitentina Ar 460 000 isan' andro ny zazavavi-kely iray vao 13 taona, Razafi- mahefa Mendrika Nirinasoa, avy eny Imerimanjaka, Ambohijanaka, izay tsaboina eny amin'ny hopitaly Ambohimiandra. (Hopitaly Ambohimiandra – Zaza marary mafy mila famonjena)
Ceny (nitranga in-1) : Omaly rahateo no tonga teto Mada­gasikara handinika miaraka amin'ny Cenit momba izany ireo manam-pahaizana manokana avy amin'ny Ceni ao Afrika Atsimo ka ny zoma no hampahafantarana ireo kandidà ny tena ho endrik'ity biletà tokana ity. (Fifidianana filoha – Mety ho latsaky ny 1 m indray ny halavan’ny biletà tokana)
scanner (nitranga in-1) : Fitiliana tamin'ny scanner no nahitana fa simban'ny otrikaretina ireo “alvéoles” amin'ny ilan-tratrany havanana. (Hopitaly Ambohimiandra – Zaza marary mafy mila famonjena)
Rakotomamonjy (nitranga in-1) : Ny herisetra eo amin'ny mpivady no tena betsaka amin'ny fitarainana”, hoy Rakotomamonjy Brigitte, mpiasa sosialy ao amin'ny Tabita, nandritra ny andro iraisam-pirenena ho an' ny fianakaviana, omaly. (Ady amin’ny herisetra – Mirotsaka ihany koa ny fiangonana)
nepotism (nitranga in-1) : Nanoratra toy izao ny mpisera Weibo “Bandy goavana mandeha sahala amin'ny Dragona sy ny Tigra” (@大背头龙行虎步) [efa voafafa ny hafatra amin'ny teny shinoa niaviany]:
Babeo (nitranga in-1) : “Hatramin'ny nisian'ny tetikasa niaraka tamin'ny Babeo dia fitarainana 390 no voaray. (Ady amin’ny herisetra – Mirotsaka ihany koa ny fiangonana)
hampiharina (nitranga in-1) : Voalaza fa mety hanamafy ny sazy hampiharina amin'io olom-panjakan'ny tetezamita ny Filankevi-pilaminan'ny Vondrona Afrikanina raha toa ka mbola misy ny fikirian'ny telo tonta hiatrika io fifidianana io. (Vondrona Eoropeana – Mitsipaka ny filatsahan’i Lalao Ravalomanana, Ratsiraka, Rajoelina)
Nanoratra (nitranga in-2) : Nanoratra ny mpisera Weibo iray hafa, “Efa natavy” (@曾经的胖胖胖胖):
Itasy (nitranga in-1) : Lehilahy roa no voasambotry ny polisy misahana ny heloka bevava, tany Mandiavato, any amin'ny faritra Itasy sy tany Bongolava ny faramparan'ny volana avrily teo. (Famonoana sinoa vavy – Tafakatra 11 ireo voasambotra, vehivavy iray karohina fatratra)
Maha­masina (nitranga in-1) : Tontosa, omaly teny Maha­masina, ny lanonana ara-miara­mila ho fametrahana azy amin'ireo andraikitra ireo. (Fanofanana manamboninahitra – Hangataka Akademia manokana ny zandarimariam-pirenena)
again (nitranga in-1) : Nanoratra toy izao ny mpisera Weibo “Bandy goavana mandeha sahala amin'ny Dragona sy ny Tigra” (@大背头龙行虎步) [efa voafafa ny hafatra amin'ny teny shinoa niaviany]:
started (nitranga in-1) : This is ‘soy-sauce vat' China, where everything ends up black [corrupt] regardless of how it started out. (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
nahatratra (nitranga in-1) : Tsy nahatratra ny salan'isa ilaina, omaly, ny fandaniana ny lahadinika izay tokony haroso hodinihina
Marie (nitranga in-1) : Raisinay am-pitiavana izay foin'ny tsara sitra-po sao mbola azo avotana ihany ny ainy, izay voalohan-janakay amin'ny zaza roa”, hoy Randriambololona Marie Odette, reniny. (Hopitaly Ambohimiandra – Zaza marary mafy mila famonjena)
handraisana (nitranga in-1) : Efa manana ivon-toerana natao handraisana sy hihainoana ny olona iharan'izany ity farany, etsy amin'ny foibe Tabita Fjkm, etsy Ampandrana. (Ady amin’ny herisetra – Mirotsaka ihany koa ny fiangonana)
nihambahamba (nitranga in-1) : Sambo mahazaka entana any amin'ny 1 500 taonina na 2 000 taonina izy io», hoy Rabemazava Soa Jean, nijoro tsy nihambahamba. (Mananara Avaratra – Misy ambadika ny raharaha andramena)
mpanankaremben' (nitranga in-1) : Ary hoy [zh]i Ren Zhiqiang (@任志强), izay mpanankaremben'ny fanana-trano manana mpanaraka mihoatra ny 14 tapitrisa ao amin'ny Weibo,
Nandika (nitranga in-2) : Mpanoratra Tea Leaf Nation · Nandika Jentilisa
authoritarianism (nitranga in-1) : One generation after another, this is our traditional culture: dictatorship, authoritarianism, and intolerance of opposition. (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
Moramanga (nitranga in-2) : Ny tenany no miandraikitra ny fibaikoana ny sekolin'ny zandarimaria ao Ambositra sy Moramanga, ny fanofanana ho fampiakarana laharamboninahitra, ary ny fanofanana ho amin'ny fibaikoana alika, eny Ivato. (Fanofanana manamboninahitra – Hangataka Akademia manokana ny zandarimariam-pirenena)
Ankazobe (nitranga in-1) : Omby dimy tamin'ireo am-polony saika hoentina hamidy no nisy nangalatra tao Ankazobe, ny 13 mey teo tokony ho tamin'ny 10 ora alina. (Tapatapany)
biraon' (nitranga in-1) : Ny talata 14 mey teo no tonga nitaraina teny amin'ny biraon'ny polisy misahana ny zaza tsy ampy taona, eny Tsaralalàna, ny renin'io zaza io. (Lazaina Avaradrano – Mpiandry omby voatondro ho nanolana zaza efa-taona)
mpiserasera (nitranga in-1) : Na dia tsy vao sambany aza ny mpiserasera shinoa no nampitaha ny zavamisy any Shina sy ao Etazonia, dia niteraka adi-hevitra momba ny zo sy adidin'ny vahoaka shinoa indray ny lohahevitra momba ny “maha-olompirenena”. (Kabarim-Panomezan-Diplaoma Nataon'i Obama Niteraka Adi-Hevitra Any Shina: Inona Ny Mahaolom-Pirenena?)
nanolana (nitranga in-1) : lehilahy iray no voatondro ho nanolana ankizivavikely iray efa-taona, tany Lazaina Avaradrano. (Lazaina Avaradrano – Mpiandry omby voatondro ho nanolana zaza efa-taona)
hitazonana (nitranga in-1) : Tamin'iny herinandro lasa iny rahateo dia mbola nanamafy ny amin'ny tokony hitazonana ireo tetiandrom-pifidianana napetraky ny Cenit sy ny Firenena Mikambana ny Masoivohon'ny Vondrona Eoropeana, Leonidas Tezapsidis. (Vondrona Eoropeana – Mitsipaka ny filatsahan’i Lalao Ravalomanana, Ratsiraka, Rajoelina)
rose' (nitranga in-1) : «Misy mpikambana ao amin'ny Parlemantan'ny Tetezamita milaza fa hanampy anay dia mangataka aminay ny anaran'ireo mpanao ‘bois de rose' tsy ara-dalàna sy ny mpiray tsikombakomba aminy. (Mananara Avaratra – Misy ambadika ny raharaha andramena)
Ambohijanaka (nitranga in-1) : Marary mafy ka mila fanafody mitentina Ar 460 000 isan' andro ny zazavavi-kely iray vao 13 taona, Razafi- mahefa Mendrika Nirinasoa, avy eny Imerimanjaka, Ambohijanaka, izay tsaboina eny amin'ny hopitaly Ambohimiandra. (Hopitaly Ambohimiandra – Zaza marary mafy mila famonjena)
maso (nitranga in-1) : Toa very fanahy mbola velona ny any Mananara Avaratra mahita maso ny fitrandrahana sy fanondranana tsy amin-tahotra ny andramena, na dia efa namoaka didy fandraràna izany aza ny fitondrana foibe. (Mananara Avaratra – Misy ambadika ny raharaha andramena)
hihatra (nitranga in-1) : Ka ianareo mpitandro filaminana ve tena akaiky ny fokonolona, izay mitaintain-dava amin'ny fanafihana mety hihatra amin'ny tokantranony, na tsaho na tsia. (Ny aza voany)
hankalazaina (nitranga in-1) : 56 taona nanaovana sary hosodoko, hankalazaina amin'ny taona ho avy ny faha-80 taona nahaterahan-dRaparivo Roland Ramaheninarivo, na Raparivo R. (Sary sy hosodoko – Hisokatra amin’ny fialan-tsasatra lehibe ny «sekolin’ny sary» an-dRaparivo)
pobeny (nitranga in-1) : Nivoitra nandritra ity atrikasa ity mantsy ny tsy fahampian'ny vy sy ny «zinc» eo amin'ny sakafon'ny Malagasy amin'ny anka- pobeny, indrindra ho an' ireo reny sy ny zaza. (Fikarohana – Nampahafantarina ny karazam-bary vaovao ho an’ny sakafo mahasalama)
Raoelina (nitranga in-1) : Andrasana ihany koa ny lalaon'ny Cjsoi, hatao atsy La Réunion”, hoy Raoelina Andriambololona Tiana, filohan'ny federasionan'ny triathlon. (Fiofanana – Namokatra mpanazatra sivy ny Triathlon)
teto (nitranga in-1) : Omaly rahateo no tonga teto Mada­gasikara handinika miaraka amin'ny Cenit momba izany ireo manam-pahaizana manokana avy amin'ny Ceni ao Afrika Atsimo ka ny zoma no hampahafantarana ireo kandidà ny tena ho endrik'ity biletà tokana ity. (Fifidianana filoha – Mety ho latsaky ny 1 m indray ny halavan’ny biletà tokana)
Avaradrano (nitranga in-1) : lehilahy iray no voatondro ho nanolana ankizivavikely iray efa-taona, tany Lazaina Avaradrano. (Lazaina Avaradrano – Mpiandry omby voatondro ho nanolana zaza efa-taona)
hakiviany (nitranga in-1) : Rehefa azony anefa ny anarana dia entiny ampitahorana sy hakana vola any amin'ireto farany», hoy ihany Rabemazava Soa Jean naneho ny hakiviany amin'ireo olona mba nitarainana. (Mananara Avaratra – Misy ambadika ny raharaha andramena)
ividianana (nitranga in-1) : 450 Ariary no ividianana ny kapoakan'ny vary. (Mananara Avaratra – Misy ambadika ny raharaha andramena)
Hita tao amin'ny "https://mg.wiktionary.org/w/index.php?title=Mpikambana:Bot-Jagwar/tenin%27ny_gazety/16_Mey_2013&oldid=11560485"
Voaova farany tamin'ny 16 Mey 2013 amin'ny 22:06 ity pejy ity.